Fikarohana sokajy vokatra - Expo momba ny varotra iraisam-pirenena Florida
3 Daughters Brewing Manufacturer Vokatra amin'ny sakafo zava-pisotro At 3 Daughters Brewing, miahy zavatra telo ambonin'ny zavatra rehetra izahay: ny fanaovana labiera tsara, ny fizarana izany labiera izany amin'ny namantsika, ary ny fanohanana ny vondrom-piarahamoninay. 3 Daughters Brewing dia labiera mpamokatra asa tanana any St Petersburg, Florida. Nanamboatra labiera 7 nandritra ny 42 taona izahay ary lasa mpamokatra labiera fahenina lehibe indrindra eto Florida. Manamboatra labiera, cider, seltzer mafy, soda mafy, sangria (divay avy amin'ny voaloboka!) Izahay, ary seltzer CBD tsy misy alikaola. Manana paompy miodina 3 amin'ny bara telo samihafa izahay izay ahafahantsika manolotra famoronana vaovao ho an'ireo mpiaro anay hanomezana valiny alohan'ny handinihana ireo mpanjifa mialoha sy ivelan'ny trano. Tamin'ny taona 2019, nanandrana zavaboary 233 isan-karazany tao amin'ny efitrano fanandramana izahay. Izahay dia mizara manerana an'i Florida ary manondrana any Frantsa sy EU. Izahay dia manolotra ny vokatray amin'ny kapoaka manomboka amin'ny 12oz ka hatramin'ny 32oz ary manana ny fahaizan'ny marika manokana. Azafady mba jereo ny loharanon-tsika amin'ny santionany amin'ny portfolio. Tianay ny fotoana hiara-miasa aminao. Beer - Cider - Hard Seltzer - Hard Soda - Sangria - zava-pisotro misy alikaola
AABACO Environmental Industries Manufacturer Fitaovana sy kojakoja indostrialy Fandoroana fako Niorina tamin'ny 1984, Aabaco dia manome vahaolana avo lenta momba ny solika sy ny simika ary ny vokatra azo antoka avy amin'ireo mpamokatra lehibe rehetra: 3M, DuPont, Honeywell, MSA, Kimberly Clark, Moldex, Pyramex, Ergodyne, Showa Gloves ary maro hafa. Manolotra vokatra 200,000 14 mahery sy sambo avy amin'ny ivon-toerana fizarana XNUMX manerana ny firenena izahay. Fandoroana fako - Bio Liquid Cleaner - Spill Pads - Mpitroka solika - Kitapo fitoeran-javatra
Airo Industries, Inc Manufacturer Fitaovana sy kojakoja indostrialy Construction Equipment Mpanavao lohahevitra sy mpanamboatra rafitra fanaterana fitaovana misy tantara marobe mahomby amin'ny tetik'asa fananganana Crane - Rafitra fananganana fitaovana - Fitaovana fananganana trano
Airocide Air Purifier Manufacturer Clean1tp Rafitra fanadiovana ny rivotra Airocide dia teknolojia fanadiovana rivotra novolavolain'ny NASA. Izy io dia nodiovina, ary voaporofo fa mahomby amin'ny viriosy, bakteria, ary olana hafa momba ny kalitaon'ny rivotra tato anatin'ny 25 taona. Photocatalytic oxidation - fanadiovan-drivotra an-trano - Teknolojia fanadiovana ny rivotra
Allied Steel Buildings Manufacturer Fananganana fitaovana Trano vita mialoha Allied Steel Buildings, dia mpamatsy entana mpanazatra ny tranobe vita vy vita amin'ny maotera avo lenta sy ny rafitra fananganana vy. Tao anatin'ny 17 taona niainany, ny orinasanay dia nanolotra tetikasa vy mihoatra ny 5,000 manerana an'izao tontolo izao, nanolotra vahaolana fananganana ho an'ny indostria maro samihafa, manomboka amin'ny fiaramanidina ka hatramin'ny varotra sy fizarana. Trano vy vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny alim-baravarankely - injeniera fanamboarana
American Manufacturing Co. Manufacturer Automotive Vokatra fikarakarana fiara American Mfg. Co., fianakaviana manana sy miasa mihoatra ny 25 taona. Manana traikefa amin'ny famokarana simika fiara, fikarakarana trano & indostrialy. Fantatra amin'ny kalitao sy ny fahombiazan'ny vokatra marika tsy miankina sy ny marika natokana ho an'ny Indostria - marika RUDSON, PurpleTUFF ary BugOFF. Coolant automotive - Vokatra karakarain'ny fiara - Vahaolana fanadiovana- Fizarana fiara
American TelePhysicians: The Home of Digital Healthcare Service Provider Siansa fiainana sy haitao fitsaboana Telemedicine American TelePhysicians dia orinasan-tserasera nomerika tarihin-dokotera sy serivisy mpitsabo miaraka amin'ny asa any Azia, Aostralia ary Etazonia. Mientanentana amin'ny fikarakarana ny marary izahay ary miasa tsy an-kijanona izahay mba hitondra fitsaboana tsara sy mora amin'ny olom-pirenena na aiza na aiza. Ity taona lasa ity dia nanasongadina ny filàn'ny safidy fitaterana fahasalamana ary ny vokatray dia natao hanohanana ireo marary na amin'ny trano na amin'ny trano. Ny tobim-pitsaboana virtoaly, noforonin'ny mpitsabo, dia nandinika tsara ny traikefan'ny marary, ny toeram-pitsaboana / mpitsabo / mpikarakara / traikefa momba ny fianakaviana, ny filàna fidirana amin'ny fotoana tena izy amin'ny tantaram-pitsaboana, tsiambaratelon'ny marary ary serivisy fanampiana - toy ny e-prescription na in- fitsapana EEG ao an-trano - izany adiresy izany ao an-trano sy ilain'ny fanaraha-maso lavitra. Ny teknolojia telemedicine dia manelingelina ny indostrian'ny fahasalamana amin'ny fomba tsara. Ny fotodrafitrasa sy ny marary dia samy mandray ny telemedicine ho safidy mety rehefa tsy azo atao ny mitsidika azy manokana. Tianay ny mizara ny fahitanay. Firaketana ara-pahasalamana elektronika mifototra amin'ny rahona (EMR) - Rafitra fitantanana marary - SmartClinix - Telemedicine - Rindrambaiko fitsaboana sy fampivoarana ny fampiharana
Anderson Connectivity Manufacturer Aviation sy Aerospace Teknolojia fifandraisana Systems Anderson Connectivity dia orinasam-pandraharahana momba ny serasera zanabolana natao manokana momba ny famolavolana, ny famokarana ary ny fanompoana ireo rafitra antena satcom manerana ny rivotra, ny tany ary ny ranomasina. Rafitra fialam-boly sy fifandraisana amin'ny sidina - Famolavolana System Antenna
Anjon Holdings Manufacturer Siansa fiainana sy haitao fitsaboana Medical Equipment Anjon Holdings manamboatra sy mivarotra ny Anjon Bremer Halo System manerantany. Anjon Holdings dia orinasa mpamokatra fifanarahana ara-pitsaboana mamokatra implant sy fitaovana ho an'ny orthopedics voalohany indrindra. Ny orinasa dia ISO 13485: 2016, voamarina MDSAP ary voasoratra anarana i FDA. Ny orinasa dia mitady mpaninjara ivelan'ny Etazonia ho an'ny rafitra halo. Ny orinasa dia mitady solontenan'ny varotra ho an'ny tetikasa fananganana fifanarahana ivelan'i Etazonia. Rafitra fanamafisana ny vozon-tranonjaza ivelany - Rafitra Anjon Bremer Halo - Famokarana fitaovam-pitsaboana fitaovana- Fitaovana orthopedika - Fanohanana ny hazondamosina
Argonide Corporation Manufacturer Clean1tp Ny rano sy ny fitsaboana rano Niorina tamin'ny taona 1994, Argonide dia natokana ho an'ny siansa sy ny fanamboarana ireo vokatra fanivanana rano izay tsy mamokatra rano madio matsiro fotsiny, fa koa rano madio madio ara-biolojika. Ny teknolojia sy ny rafitra sivana argonide izay manavao sy tsy manam-paharoa dia misy fiantraikany tsara amin'ny rano amina miliara eran-tany amin'ny tsena marindrano manomboka amin'ny fitsaboana sy ny famokarana ka hatramin'ny fonenana sy fandraisana. Amin'ny alàlan'ny tamba-jotra OEM sy mpivarotra an'i Argonide, misy vintana lehibe ny fampiasanao ny vokatra na serivisy izay ny teknolojia filtration Argonide dia singa iray tsy miova. Argonide dia manandrana manavao hatrany ny fanivanan'ny rano miaraka amin'ny forona sy patanty izay entanin'ny teknolojia nalaina avy amin'ny NASA (toy ny teknolojia filtration NanoCeram®), amin'ny fampiasana DEAL® amin'ny rafitra fonenana (rafitra filtration CoolBlue®). Argonide dia mijoro ao ambadiky ny haitao misy azy porofon'ny fanamarinana IAPMO. Argonide dia mpamokatra voasoratra anarana ISO 9001: 2015. Vokatra fanivanana rano - Sivan-drano amin'ny rano ao an-trano - Sivanin'ny rano onenan-trano - Sivanin'ny rano ara-barotra - Rano voadidy
Armor Screen Hurricane Protection Manufacturer Fitaovana sy kojakoja indostrialy Fiarovana ny rivotra Armour Screen dia malaza sy atokisan'ny mpanao mari-trano, ny injeniera ary ny mpiantoka hanome fiarovana amboniny na dia ny tafio-drivotra ratsy indrindra aza. Ny vokatray dia nampiasaina hiarovana ireo rafitra isan-karazany, ao anatin'izany ny trano, trano fisakafoanana, hotely, trano fandraisam-bahiny, zavakanto sy trano manan-tantara tsy voavidim-bola na dia ireo rivodoza mahery sy rivodoza ary rivodoza sokajy 5 mahery indrindra aza. Tsy hiaro anao sy ny fanananao amin'ny fahavoazana ihany ny takelaky ny rivo-doza ataontsika fa mahatonga ny habakabaka ivelany hahafinaritra kokoa mandritra ny taona ihany koa. Ireo lamba mangarahara ireo dia vita amin'ny lamba henjana, maharitra, miorina amin'ny UV izay manakana ny rivotra mahery, mandatsaka orana, tara-pahazavana mafy, ary bibikely, izay mahatonga azy ireo ho tonga lafatra azo ampiasaina manodidina ny patio sy ny lavarangana. Ny trano fisakafoanana misy seza ivelany dia mitatitra fa miaraka amin'ny Armor Screen, nahita ny fidiram-bolan'izy ireo hatramin'ny 70% izy ireo nandritra ny volana fahavaratra sy orana. Pikantsary amin'ny rivodoza - Fanapahana ny rivotra - Fitaovana fanamboarana indostrialy sy ara-barotra - Sarin-drivotra
ASAR Automated Storage Service Provider Serivisy ara-bola sy matihanina Construction Services ASAR automated storage dia vahaolana azo ianteherana maharitra sy maharitra amin'ny maro amin'ireo fanamby fitahirizana atrehin'ireo tompona fotodrafitrasa an-dranomasina, fiara ary trano fitahirizana isan'andro. Ity vahaolana fitahirizana marani-tsaina ity dia manolotra fitehirizana avo lenta kokoa, fidiram-bola bebe kokoa ary ROI, ary tsy misy fihenam-bidy. ASAR automated storage any an-dranomasina dia manolotra fisondrotana 30-50% amin'ny habaka toratelo azo ampitahaina amin'ny fitehirizana forklift nentim-paharazana, miteraka ny fidiram-bola avo kokoa sy ny ROI ary mampihena be ny risika sy ny lesoka ataon'ny mpandraharaha. ASAR dia afaka manome fiakarana lehibe amin'ny toerana azo ampiasaina, mampihena ny fatiantoka ny halatra sy ny fahasimbana, ary hanatsara ny fahombiazan'ny garazy fijanonana, ny toerana fitahirizana fiara, ary na ny mpivarotra aza amin'ny alàlan'ny fanesorana ny faritra mitondra fiara. Ny fanoloana ny fomba fitehirizana nentim-paharazana amin'ny vahaolana mandeha ho azy dia mety hampitombo avo roa heny ny kaontenera voatahiry ao amin'ny orinasa mpamokatra entana na fizarana tsy misy fiakarana ny dian-tongotra, izay mampisondrotra ny fidiram-bola sy ny sandan'ny famarotana. Fananganana fitehirizana drystack Marina - Fanamboarana ny fanidinan'ny fiaramanidina - fanamboarana trano fitehirizam-bokatra - Fanamboarana trano fanatobiana entana - birao fananganana birao - rafitra fiarovana ny fikaohon-tany eny amoron-dranomasina
Ashley Furniture Industries Manufacturer Entana ny mpanjifa Fanaka ao an-trano Ashley Furniture dia natsangana tamin'ny taona 1945 ary izy no mpanamboatra fanaka lehibe indrindra manerantany ary mpivarotra ambongadiny 1 any Amerika Avaratra. Amin'ny maha-fikambanan'ny fanaka mitambatra mijoro, izahay dia miezaka ny hihoatra ny andrasan'ny mpiara-miombon'antoka sy ny mpanjifa any amin'ny firenena mihoatra ny 155 manerana an'izao tontolo izao. Mpanamboatra sy mpivarotra ambongadiny izahay manolotra tsipika vokatra feno fanaka ao an-trano. Ny fanoloran-tenan'ny mpivarotra hatrany ny fomba, ny vidiny, ny kalitao ary ny serivisy dia nahazo ny tsy fivadihana sy fahatokisan'ny mpanjifantsika manerana an'izao tontolo izao. Androany, Ashley Furniture HomeStore dia manana toerana mihoatra ny 1,000 eran'izao tontolo izao. Raha liana amin'ny fivarotana ny vokatray ao amin'ny fivarotanao ianao na amin'ny fahazoanao ny fahazoan-dàlana ao amin'ny Ashley Furniture Homestore anao manokana, mandamina fivoriana hiresahana aminay. Famokarana fanaka ao an-trano - Mpivarotra fanaka an-trano - Mpivarotra fanaka an-trano
asphericon, Inc. Manufacturer Photonics sy optika Photonics sy optika Mamelombelona ny fahitana. Miaraka amin'ity iraka ity, ny asphericon dia manosika hatrany ny fetran'ny mety ary mametraka ny tsangambato vaovao eo amin'ny tontolon'ny optika. Ny fitiavantsika ny fanavaozana ny famokarana singa aspherika miaraka amin'ny teknolojia vaovao dia manova ny ambaratongam-pahalalana sy ny kalitao azo atao. Momba ny orinasa: Niorina tao Jena / DE tamin'ny taona 2001, ny asphericon dia nanjary mpitarika ara-teknolojia amin'ny sehatry ny fanamboarana ny rafitra aspher und aspheric noho ny fahaizana manokana sy ny firehetam-po. Ny teknolojia famokarana farany, ny lozisialy fanaraha-maso tsy miankina mivoatra, ny fitaovana fandrefesana an'izao tontolo izao ary ny mpiasa tena mahay dia manome antoka fa manome asphericon mpanjifa maherin'ny 750 manerantany miaraka amin'ny vahaolana vaovao. Hanampy anao amin'ny famolavolana optique voalohany izahay, amin'ny alàlan'ny famokarana sy ny firakotra, ny metrolojia ary ny antontan-taratasy, hatramin'ny fivorian'ny modules optique sy ny toetran'ny optika. Bikan'ny Aspheric - Solomaso maso - Optika -Optometry - Prisma - Masolavitra indostrialy
ASSET Engineering Service Provider Serivisy ara-bola sy matihanina Electrical Engineering Niorina tany 2000, ASSET Engineering dia orinasam-panadihadiana ekena fa manampahaizana manokana amin'ny famolavolana sy famakafakana ny rafitra herinaratra. Ny ekipanay dia ampiorenan'ireo mpitarika ny rafitra famolavolana herinaratra veteran sy injeniera matihanina amin'ny rafitra fanaraha-maso mitombo. Izahay dia manome ny mpanjifanay traikefa am-polotaona maro amin'ny famolavolana injeniera elektrika manokana, rafitra fiarovana sy fifehezana ary serivisy fitantanana tetikasa. Ny mpanjifanay dia misy orinasam-pitaovana, mpamokatra herinaratra tsy miankina, ary mpampiasa angovo lehibe sy indostrialy. Mpanjifa maherin'ny 100 no niantehitra ASSET Engineering ho an'ny famolavolana herinaratra nohavaozina izay niaritra ny andrana. Herinaratra - Fandalinana sy famakafakana injeniera - Injeniera sy famolavolana - Famolavolana fananganana - Injeniera sy endrika famaranana eo anoloana - Fifehezana angovo - Drafitra fanamafisam-peo sy jiro
Associated Industries of Florida Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Fikambanana tsy mitady tombom-barotra Fitondran-tena ataon'ny governemanta Hatramin'ny 1920, Associated Industries of Florida (AIF) dia nisolo tena ny fitsipiky ny fanambinana sy ny asa malalaka alohan'ny sampana telo amin'ny governemanta fanjakana. Fantatra amin'ny anarana hoe "The Voice of Florida Business" ao amin'ny Sunshine Sate, ny AIF dia fikambanana an-tsitrapo ataon'ny orinasa maro samihafa, noforonina mba hampiroborobo ny toe-karena ara-toekarena any Florida izay mitarika amin'ny fitomboana, ny fampandrosoana ary ny fiahiam-bolan'ny indostria sy ny orinasa ary ny vahoaka ao amin'ny fanjakana. . Fanentanana amin'ny orinasa - hetsika politika
Atlas Specialty Lighting Manufacturer Siansa fiainana sy haitao fitsaboana Jiro, battera, Module ary famatsiana herinaratra Atlas Specialty Lighting dia iray amin'ireo mpaninjara tahiry lehibe indrindra Modules, Jiro, famatsiana herinaratra & bateria biomedika ho an'ny sehatry ny fitsaboana. Manome vokatra kalitao, vidin'ny fifaninanana ary serivisy ho an'ny mpanjifa tena tsara. ATLAS dia mitahiry modely fanoloana loharanom-pahazavana mavesatra Cermax xenon, jiro, famatsiana herinaratra ho an'ny ankamaroan'ny fampiasana ara-pahasalamana, fandidiana ary ny endoscopic. ho an'ny mikraoskaopy, jiro fiasana amin'ny opération, optic fibre, endoscope, fitaovana biolojika, projectors sy hafa. Modules, Jiro ary Batterie dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana avy amin'ny: Stryker, Zeiss, Olympus, Pentax, Fujinon, ConMed Linvatec, Leica, Storz, Smith & Nephew, Welch Allyn, EXCELITAS ary maro hafa! Jiro ara-pahasalamana - Batterie médical - Fitaovana herinaratra ara-pahasalamana
AVATRADE Service Provider Aviation sy Aerospace Fitaovana sy fitaovana fiaramanidina Veloma ry RFQs. Salama mangarahara! Ny tsena an-tserasera tsara indrindra amin'ny fifanakalozana faritra sy fivorian'ny sidina. Maimaimpoana ny fisoratana anarana! Fitaovana sy fitaovana fiaramanidina ara-barotra - Fitaovana sy fitaovana fiaramanidina
Avparts International LLC Distributor Aviation sy Aerospace Fanamboarana sy fanamboarana fikarakarana fiaramanidina AVPARTS INTERNATIONAL LLC dia orinasam-pivarotana sy fizarana manome ampahan'ny fiaramanidina. Niorina tao Miami, Florida USA, ny drafitra maharitra ataon'ny orinasa dia misy famokarana miaraka amin'ny haitao maoderina tena hitondra faritra azo antoka. AVPARTS dia mikendry ny sehatry ny varotra kojakoja iraisam-pirenena, mitady ho mpamatsy tsara indrindra. Ny tanjona voalohany amin'ny orinasa dia ny hiara-hiasa amin'ireo mpitatitra rivotra iraisampirenena sy eto an-toerana ary ny fikojakojana ara-teknika azy ireo. Manome ny mpanjifanay ny teknolojia farany, serivisy haingana sy azo antoka hanomezana fahafaham-po ny fangatahan'izy ireo amin'ny ambaratonga avo lenta. Ny mpanjifanay dia misafidy ny Avparts International mifototra amin'ny laza mifandraika amin'ny fiarovana izay namboarina niaraka tamin'ny fizarana haingana sy azo antoka. Ny faritra rehetra ananantsika dia azon'ny Boeing Licensee sy ny mpanamboatra anaovana tanteraka. AVPARTS dia mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra sy fitsipika FAA, ASA, ISO. Fiaramanidina fiaramanidina Boeing - Bearings - Nuts - Sleeves - Brackets - Bushings - Springs - Landing Gear
B.S.T. Medical Supply Manufacturer Siansa fiainana sy haitao fitsaboana Post Fitaovana fandidiana Izahay dia manamboatra sy mizara akanjo sy kojakoja famatrarana hamenoana ny fandidiana tarehy. Fanohanana aorian'ny fandidiana - Corsets - fehikibo - akanjo anatiny manokana - fitafiana famatrarana - Fitaovana fandidiana
Balanced Guru Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra fahasalamana sy hatsarana Nanorina izahay Balanced Guru miaraka amina fanoloran-tena mahatsiaro tena sy mafana fo hampiroborobo ny fahasalaman'ny mpanjifanay sy ny planeta iombonantsika rehetra. Izahay dia manao izany amin'ny alàlan'ny fanamboarana vokatra mahasoa izay voamarina fa voajanahary, tsy misy habibiana ary maharitra mandritra ny famerana ny fiatraikany eo amin'ny tontolo iainana ary hampitombo ny fiatraikany ara-tsosialy amin'ny famerenana ireo vondrom-piarahamonina izay misy dikany lehibe amintsika. Ny fampanantenanay anao dia tsy hampiasa afa-tsy ireo akora sy fitaovana azo antoka ho an'ny tenanay sy ny tontolo iainana, na eto ianao ho an'ny menaka fanosotra amin'ny vatana na ny menaka volo. Ampiasainay manokana ireo akora manta izay voamarina voajanahary sy nambolena tamin'ny fijinjana maharitra. Aroma Therapy - Fanadiovan-tarehy - Toner - Serum amin'ny tarehy - fikosohan-batana- Bokotra vatana - menaka tena ilaina
Barricade International, Inc. Manufacturer Afo sy fiarovana Tapitra ny afo sy ny afo Ny filoham-pirenena Barricade International, John Bartlett no mpamono afo any Florida izay namorona ny gel fanakanana afo voalohany rehefa avy nandinika fa ny diaper zazakely azo ampiasaina sy mando dia tsy may nandritra ny dabam-pako mahazatra. Hatramin'ity fiandohana am-panetren-tena ity dia nitondra rafitra mora ampiasaina isika izay manova ny fomba fiarovan'ny tompon-trano ny fananany sy ny fomba fiainany sarobidy indrindra. Ary ny mpamono afo matihanina dia manana fitaovana mahomby hiarovana ireo tanàna sy trano atahoran'ny doro tanety. Miasa toy ny polymers tena mitroka ao anaty vodin-tsolika, ny Barricade dia mitroka ny lanjan-drano imbetsaka ary mamorona spaonjy mando sy matevina. ” Ireo kibay feno rano ireo dia miraikitra amin'ny velaran-tany ao amin'ny sosona molekiola maro - ny tsirairay amin'izy ireo dia tsy maintsy esorina alohan'ny hahatonga ny sosona ambaniny. Rehefa avy may ny afo dia manasa rano izy ary azo zahana. Fisorohana amin'ny afo - Tsy maharitra afo - Gel manakana ny afo
Bell Performance Manufacturer Simika sy Petrochemical Additives amin'ny solika 112 taona Bell Performance, mpanamboatra solika amerikana natsangan'i Robert Bell (izay nanangana ny solika voalohany manerantany tamin'ny 1909), manondrana eran'izao tontolo izao. Izahay dia manamboatra olan'ny solika isaky ny indostria, na etanol na bio hafa, lasantsy, gazoala, na solika famokarana herinaratra, ary mifanaraka amin'ny filàn'ny orinasa tsirairay miaraka amin'ny vahaolana simika, vahaolana mekanika, ary ny protokolom-pitsapana faran'izay tsara, ny fanabeazana avo lenta ary ny fahaizana mampiofana. Izahay dia mitady mpaninjara handrakotra ny tsenambarotra iraisam-pirenena manokana misy ny fari-pahaizana manokana eo amin'ny tsenan'ny indostria, varotra ary ny mpanjifa. Izahay no manam-pahaizana hahatonga ANAO ho manam-pahaizana amin'ny mpanjifanao! WeFixFuel.com! Additives amin'ny solika - Additives amin'ny solika - Additives amin'ny solika maty
Big Storm Brewery Manufacturer Vokatra amin'ny sakafo zava-pisotro Niorina tamin'ny taona 2012 tao Pasco County, Big Storm amin'izao fotoana izao dia manana efitrano fisakafoanana efatra ao amin'ny State Sunshine: Clearwater, Odessa, Orlando ary Cape Coral. Big Storm dia nandray ny tenifototra misy ny “Forecast any Craft Beer any Florida”, tamin'ny alàlan'ny famolavolana filaharana milay amin'ireo tian-dry zareo Florida toy ny Tropic Pressure Florida Ale, rakotra voninkazo hibiscus, ary Key Lime Shandy, namboarina niaraka tamina felana sokay. Labiera asa-tanana - zava-pisotro misy alikaola
Blue Tunnel Corp. Distributor Teknolojian'ny fampahalalana Fiarovana sy Marketing BLUE TUNNEL dia orinasa Cyber ​​Security Solutions amerikana hanome ny vokatra sy serivisy haitao tsara indrindra hanatsarana ny filaminana sy ny kalitaon'ny fiainana ho an'ny olona. TARGET mamokatra valiny mahomby amin'ny alàlan'ny rindrambaiko Artimental Intelligence (Video Analysis Deep Learning) momba ny sary fakantsary fanaraha-maso hahitana sy hampandrenesana hetsika mandeha ho azy sy amin'ny tena izy. PORTFOLIO Ny portfolio lehibe indrindra eto an-tany. Mihoatra ny maody maodelim-pahaizana artificielle 30 ho an'ny fampiharana samihafa. Tanàna maranitra VERTIKA, indostria & fotodrafitrasa mahery vaika, asa aman-draharaha agro, fivarotana sy varotra, banky sy fitantanam-bola, fitaterana, fotodrafitrasa sy tranobe, faritra onenana, tontolo iainana sy faritany. HEVITRA MISONGADINA & HORO: Ny hany eto amin'izao tontolo izao mahay mamantatra setroka sy / na afo amin'ny fakantsary IP iray ihany. MITSIPOKA & MITSANGA: Mahita olona mikorisa sy / na mianjera amin'ny toe-javatra mety hitranga. FANekena ny tarehy: mamantatra ny olona, ​​ny foko, ny lahy sy ny vavy, ny taona sns. COVID-19: fonosana hijerena ny fanarahan'ny olona ny lalàna mifehy ny areti-mandringana. Cyber ​​Security - Faharanitan-tsaina artifisialy - Fandinihana horonantsary sy forensika - Rindrambaiko - Tanàn-tsaina IoT
Bob's Machine - Outboard Accessories Manufacturer Vokatra sy haitao an-dranomasina Fitaovana môtô ivelany Bob's Machine dia mpitarika manerantany amin'ny famokarana kojakoja maotera sambo ivelany. Ny fifantohana lehibe dia ao amin'ny Hydraul Jack Plates, izay mampiakatra ny môtô ivelany amin'ny alàlan'ny bokotra iray hahazoana toekarena solika, fampisehoana ary fidirana amin'ny rano marivo. Ny kojakoja hafa dia misy nosecones Low pickup rano, kojakoja trolling motor, ary maro hafa. Plate Jack Hydraulika - Fitaovana fampisehoana moto ivelany - Fanondranana môtô ivelany - Fitaovana môtô ivelany
Broward College International Admissions anjerimanontolo Institution Educational Fanampiana Visa F-1 Broward College (BC) dia naorina tamin'ny taona 1960 ary miorina ao South Florida any akaikin'ny Miami sy Ft. Lauderdale. BC dia manompo mpianatra 63,000+ avy amin'ny firenena 150+ ary manana mpianatra visa 500+ F1. BC dia manolotra programa diplaoma an-jatony. Ny mari-pahaizana Associate of Arts (AA) dia ampahany amin'ny programa 2 + 2 mamela ny mpianatra hamita ny roa taona voalohany amin'ny mari-pahaizana bakalorea amin'ny vidiny ambany kokoa, ary avy eo afindra ho any amin'ny oniversite 2 mahery hamita ny 24 taona farany an'ny bakalorea. Ny mari-pahaizana Associate of Science (AS) dia programa maharitra 2 taona izay natao hanomanana ireo mpianatra hiasa eo noho eo amin'ny sehatry ny asa manokana toa ny siansa ara-pahasalamana, ny haitao fampahalalana, ny kanto sary ary maro hafa. Ny programa English for Academic Tujuan (EAP) dia natao hampianarana anao ho mpianatra mampiasa ny teny anglisy ary TSY hianatra teny anglisy fototra. Ity programa ity dia manampy koa ireo mpianatra manana diplaoman'ny oniversite avy any amin'ny fireneny hoekena ho lasa mpianatra any Etazonia. Fandaharam-pianarana iraisam-pirenena ho an'ny mpianatra - Fandaharam-pianarana any ivelany - F1 Visa FXNUMX
Bugs Off Pads - Awesome Products Corp. Manufacturer Automotive Vokatra fanadiovana fiara mandeha amin'ny fiara Ny US nanao Bugs Off® Pads no fomba tsara indrindra hanesorana ireo bibikely avy eny ambonin'ny fiara, fa, manao bebe kokoa izy ireo! Manadio haingana sy mora izy ireo satria savony sy rano fotsiny no ilain'izy ireo ary azo antoka ho an'ny faritra rehetra amin'ny fiara ianao ka afaka manasa ny fiaranao manontolo miaraka amin'izy ireo, manala ny loto, ny loto, ny bibikely, ny tara-by, ny taim-borona, sns. ampiasaina amin'ny: loko, akanjo madio, plastika, sary, metaly, vera. Tsy misy vokatra fanesorana bibikely hafa afaka manao an'io fanambarana io. Izahay dia manome antoka ny vokatray amin'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa mandritra ny 60 andro, lava kokoa noho ny ankamaroan'ny vokatra farany. Awesome Products Corp. dia natsangana tamin'ny taona 1996 ary nanomboka tamin'izany fotoana izany no nanamboarana ireo pad ireo ho an'ny fanadiovana fiaramanidina, fiara, kamio ary RV's. Manana patanty 1 sy mari-barotra 5 federaly voasoratra anarana izahay. Ny sasany amin'ireo mpanjifanay amin'ny sehatry ny fiara dia: Ace Hardware, Automotive Intl., Menard's Home Stores, Stoner Inc., Warren Distribution. Pads amin'ny antsipiriany - Detailing ny automotive - Fanadiovana fiara-mandeha - vokatra fanadiovana sambo - vokatra fanadiovana fiara
Caliber Sales Engineering Manufacturer Aviation sy Aerospace Fanamboarana sy fanamboarana fikarakarana fiaramanidina Naorina in 1987, Caliber Sales Engineering dia mpitarika ekena amin'ny fanohanan'ny logistika tanteraka ny maso ivoho Land, Air ary Maritime. Anisan'izany, fitantanana fifanarahana, herin'olombelona, ​​fanavaozana ny rafitra, fampivoarana ny injeniera sy famokarana, fiofanana ary fanohanana eny an-tsaha. Ny herinay dia eo amin'ny fifandraisanay miasa akaiky amin'ireo mpanamboatra OEM sy singa lehibe ary koa fanamboarana neken'ny FAA. Ankoatr'izay, ny CSE dia manana fahaiza-manao amin'ny famokarana sy fanamboarana ao anatiny mba hampidirana ny Form Fit & Function, Programme Extension Life Life miaraka amin'ny Teknolojia Insertion & Upgrades, famokarana bateria & charger, ary koa ny fanavaozana sy fanamboarana ireo singa miaramila. Amin'ny maha orinasa WOSB, ISO 9001: 2015 voasoratra anarana, AS9100D & AS9120B manara-penitra, ary TRACE, dia takatr'i Caliber ny maha-zava-dehibe ny fitazonana ny haavon'ny fitantanana kalitao avo indrindra. Nametraka ny bara avo isika araka ny fahafantarantsika ny ataon'ireo mpanjifanay. Fanohanana Logistics ho an'ny masoivoho momba ny tany, ny rivotra ary ny ranomasina - MRO - ny fitantanana ny fifanarahana - ny fanavaozana ny rafitra - ny injeniera mivadika - ny famokarana ny fifanarahana - ny fanohanana ara-teknika
CellAntenna Service Provider Teknolojian'ny fampahalalana fifandraisan-davitra CellAntenna Volavola iraisampirenena, manamboatra ary manondrana vahaolana fanamafisam-peo mialoha ho an'ireo sehatra onjam-peo hampiakarana ny fari-pahaizana sy ny fahombiazan'ny rafitra RF taktika miorina amin'ny teknolojia Software Defined Radio (SDR). Ireo mpanjifantsika manerantany dia misy orinasa sy masoivohom-panjakana izay mampifangaro ireo vahaolana mitambatra amin'ny rindrambaiko hisakanana, hametrahana, ary hifehezana ireo telefaona finday ampiasain'ny olon-dratsy - ao anatin'izany ny mpampihorohoro. Izahay dia mamolavola sy mampifangaro ny fitaovanay amin'ny Rafitra Antenna nozaraina (DAS) manome fiarovana ny finday ho an'ny tranoben'ny governemanta, campus sy fonja. Ny vahaolana entinay dia manome fifandraisana azo antoka sy azo antoka ho an'ny iraka taktika. CellAntenna Ny serivisy fanavaozana sy fanohanana iraisam-pirenena dia miantoka ny fahombiazan'ny asa. Ny ekipanay injeniera efa za-draharaha dia manome fanohanana hatramin'ny famolavolana ka hatramin'ny fampidirana azy eo an-toerana. Amin'ny traikefa 19 taona, CellAntenna Ny vokatra iraisam-pirenena dia "Vita any Etazonia" ary amboarina ao amin'ny tranobenay Florida. Mpamatsy tolotra fifandraisan-davitra - Teknolojia fifandraisan-davitra - Developer sy integrator an'ny rafitra fifandraisan-davitra
Central Florida Development Council Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Fikambanan'ny fampandrosoana toekarena Business Development The Central Florida Development Council (CFDC) dia fiaraha-miombon'antoka amin'ny fampandrosoana ara-toekarena any Polk County izay notendren'ny Birao Kaomisionan'ny Polk County. Ny iraka ataon'ny CFDC dia ny hampitombo toekarena mifototra amin'ny orinasa maharitra maharitra, be karama. Mifantoka amin'ny fandraisana mpiasa an-trano sy iraisam-pirenena sy fanitarana izahay, fanentanana amin'ny asa aman-draharaha, fanamorana ny fiaraha-miasa miaraka ary fampiroboroboana ireo tetikady stratejika ao amin'ny Polk County any Florida. Governemanta eo an-toerana - Fampandrosoana ara-toekarena - Famindran-toerana eo amin'ny orinasa - Fampiroboroboana ny fanondranana
CHAMPS Software Inc. Service Provider Teknolojian'ny fampahalalana Software Development CHAMPS Software dia mifantoka amin'ny famolavolana sy fampiharana vahaolana amin'ny rindrambaiko ahafahan'ny orinasa manatsara ny tsingerin'ny fiainam-bolan'izy ireo izay misy ny herin'ny asa, fitaovana, kojakoja, fiara, fitaovana, kojakoja fanampiny ary fananana mitobaka. Ankehitriny miaraka amin'ny CHAMPS Mobile, ny fiasan'ny vahaolana CHAMPS CMMS dia mihitatra amin'ny fanomezana fahaiza-manao ivelan'ny Internet. Azonao atao ny manohy miditra amin'ny fampahalalana tena ilaina sy manoratra ny hetsika na dia tapaka aza. Rindrambaiko fikojakojana ny fitaovana ho an'ny kapitalina - Rindrambaiko fitantanana inventarika- Rindrambaiko fitantanana asa - Fividianana rindrambaiko fitantanana - Rindrambaiko rafitra ara-barotra
Chemical Injection Technologies, Inc. SUPERIOR™ Manufacturer Clean1tp Ny rano sy ny fitsaboana rano Midira ao amin'ny The Gold Standard. Rafitra sy fitaovana fampitaovana gazy sy solika SUPERIOR ™. Rehefa mividy SUPERIOR ™ Gas Chlorinator na VacuFeed Liquid Chemical Feed System ianao dia hahazo ny vokatra tsara indrindra sy mandroso indrindra eo amin'ny tsena. Vanim-potoana. Chemical Injection Technologies, Inc., dia natokana ho an'ny mpanjifa fahafaham-po, fiarovana, haitao mavitrika ary famolavolana ambony. Mampanantena izahay fa ny herinay sy ny talentanay rehetra dia hampiasaina tsy tapaka hihazonana ny vokatra SUPERIOR ™ amin'ny sisin'ny teknolojia hahafahanareo mahazo antoka hatrany fa manana kalitao avo indrindra amin'ny famolavolana sy ny fitaovana. Manome toky ihany koa izahay fa tsy ho telefaona na fax lavitra ny sain'ny tena manokana ianao. Ny ankamaroan'ny fanontaniana mahazatra dia afaka tantanan'ny mpivarotra SUPERIOR ™ eo an-toerana ianao, fa raha mila izany ianao na maniry ny valin'ny fanontaniana ara-teknika na manana hevitra sy tolo-kevitra momba ny fitaovanao SUPERIOR ™ dia eto ho anao foana izahay. Avelao hasehoko anao ny antony SUPERIOR ny vokatray rehetra! Vokatra fitsaboana ny rano maloto - Chlorinators - Fitaovana famakafakana rano maloto - Teknolojia fitsaboana rano maloto
Chicago Stainless Equipment, Inc. Manufacturer Fitaovana sy kojakoja indostrialy Gauges sy sensor Fandrefesana faneriterena fanadiovana sy thermometa dizitaly fanadiovana, sensor sensor amin'ny mari-pana (RTD's & Transmitters) sensor pression, thermometre analog (Bi-Metals) fandrefesana indostrialy vy vy, fantsakana Thermo. Fandrefesana fanerena amin'ny fahadiovana - Thermometera niomerika - fandrefesana - fitaovana indostrialy
Citrusway Nail & Skin Solutions Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra fahasalamana sy hatsarana Citrusway® dia noforonina tamin'ny hevitra mba hitondra holatra namboarina azo antoka sy voajanahary ary vokatra hoditra amin'ny mpanjifa mitombo hatrany izay mitady fomba mahomby. Ny iraka ampanaovina antsika dia ny fikasana hampianatra ny mpanjifa ny milina mahavariana fa ny vatan'olombelona ary ny fahaizany miasa nefa tsy misy fitaomana simika. Satria ny fampidirana ireo vokatra voajanahary dia mitranga amin'ny sokajy rehetra, Citrusway dia fanampiny tsara amin'ny sokajy feno vokatra misy poizina, miorina amin'ny simika. Fikarakarana manokana - Vokatra hatsaran-tarehy - Cosmetika - Fikarakarana tongotra - fikarakarana hoho- fikolokoloana hoditra
City of Miramar, FL governemanta Fikambanan'ny fampandrosoana toekarena Governemanta monisipaly I Miramar dia vondrom-piarahamonina 31 kilometatra toradroa misy mponina manodidina ny 140,000. Ny taona mediana an'ny mponina dia 36 ary amin'ireo 25 na mihoatra 90% dia manana diplaoma amin'ny lisea ary 30% manana mari-pahaizana licence. 40% ny mponina dia teratany vahiny ary 47% miteny fiteny hafa ao an-trano. Manodidina ny 43,000 ny trano fonenana, 70% amin'ireo no tompony ary manana sanda mediana eo amin'ny $ 264,000. Ny vola miditra amin'ny trano an-trano dia 66,560 $ eo ho eo. Amin'ny lafiny orinasa, manodidina ny 2,700 ny orinasa miaraka amin'ny mpiasa 40,000+. Ny sehatry ny fandraharahana manankarena dia ny fiaramanidina, fifandraisana, fitsaboana ary ny famokarana. Misy zaridaina varotra birao sy indostrialy ary ivon-toeram-pivarotana eo an-toerana. Hatramin'ny 2021, misy 3.5 tapitrisa metatra toradroa ny birao; 3.5 tapitrisa metatra toradroa ny habaka fivarotana; ary 9.6 tapitrisa metatra toradroa ny velaran'ny indostria. Famindrana fiaramanidina - Incubator amin'ny famokarana - Fampandrosoana orinasa - Fampiasam-bola mivantana avy any ivelany - Famindran-toerana eo amin'ny orinasa
CityVitae - Electromobility At Your Service Manufacturer Clean1tp Vokatra sy haitao mitondra fiara elektrika Andao ary hihaona amin'ny ekipa amin'ny CityVitae! Manolotra serivisy elektrika ho an'ny orinasa sy trano izahay. Fitaovana famerenana fiara mifono herinaratra - Teknolojia famerenana fiara mifono herinaratra - Teknolojia fiara mifono herinaratra - Rafitra fizarana angovo herinaratra
Collection 2000® & Hombre® Distributor Entana ny mpanjifa Vokatra fahasalamana sy hatsarana Miaraka amin'ny fahaizana sy traikefa an-taonany maro amin'ny famokarana sy ny fanafarana / fanondranana avy any Etazonia, Collection 2000, Inc dia mirehareha amin'ny fiheverana azy ho mpitarika mpamokatra. Ny fanapaha-kevitra rehetra dia avy amin'ny iraka ataontsika voalohany, dia ny manome ny fenitra avo indrindra amin'ny vokatra sy serivisy ho an'ny mpivarotra sy ny mpanjifa. Miaraka amin'ny fanajana ny fanao amin'ny famokarana tsara sy ny fomba fizarana tanana, dia miezaka izahay hihazona ireo fifandraisana matihanina maharitra amin'ireo mpizara rehetra na aiza na aiza toerana. Amin'ity indostria miova haingana ity dia takatray ny maha-zava-dehibe ny fanavaozana hatrany ny fomba fanaovanay mba hitazomana hatrany eo amin'ny tsena ary manolo-tena amin'izany izahay. Manasa anao izahay hizaha ny lisitray ary hifandray aminay amin'ny fanontaniana rehetra. Vokatra fikarakaran-tena - hanitra - losionera - crème - kosmetika
CONNEX Florida Service Provider Fikambanan'ny fampandrosoana toekarena Tambajotra mpamokatra Connex Florida dia angon-drakitra an-tserasera sy sehatra fifandraisana izay manampy anao hifandray amin'ireo mpanamboatra, hahita loharano ary hifanaraka amin'ny fanovana fitakiana. Sourcing Florida Products - Database an'ny mpamokatra - Sourcing amin'ny vokatra - Fikarohana vokatra - mpanamboatra - fanamboarana
CreditBench Powered By First Home Bank Service Provider Serivisy ara-bola sy matihanina Serivisy amin'ny banky CreditBench, izay ampiasain'ny First Home Bank, dia manana foibe any St. Petersburg, Florida. Laharana tsy tapaka ho iray amin'ireo mpampindram-bola 10 lehibe amin'ny SBA any Etazonia, ary mpampindram-bola SBA ambony indram-bola mitentina 350,000 $, ny fizarana CreditBench an'ny First Home Bank dia namatsy $ 1 miliara dolara amin'ny indram-bola SBA ho an'ny mpanjifantsika manerana ny firenena. Ny fanolorana findramam-bola kely amin'ny $ 50,000 ka hatramin'ny $ 5 tapitrisa mba hanomezana fahafaham-po ny filanao asa, ny tahan'ny fifaninanana, ny fepetra takiana ary ny fandraisana fanapahan-kevitra haingana dia nanampy anay hahazo ny SUD National SBA Preferred Lending Status. Famatsiam-bola fampidirana sy fanondranana - fampindram-bola ara-barotra - Kapital miasa - Fandaharanasa fampindramambola SBA - findramam-bola
Crescent Garden Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra momba ny zaridaina Amin'ny maha marika am-pitokisana atokisan'ny mpiantoka anay, ny manampahaizana momba ny zavamaniry, ny foibe zaridaina tsy miankina sy ny akanin-jaza manerantany, dia manolotra kaontenera sy kojakoja miavaka amin'ny endrika voadio sy ny fanavaozana ny zava-bita izay maharitra ary maharitra ho an'ny zaridaina mahomby sy aingam-panahy. amin'ny Crescent Garden, mino izahay fa ny mpamboly dia tokony hiasa ho anao fa tsy ny mifanohitra amin'izay. Fantatray izay mety indrindra amin'ny zavamaniry mahasalama sy ireo olona tia azy ireo. Miaraka amin'ny fahitana mba hahamora ny fahafahan'ny zaridaina sy hifandraisana amin'ny olon-drehetra, na eo aza ny fanerena ny fenitry ny indostria amin'izay azo atao, dia manokan-tena izahay amin'ny Crescent Garden amin'ny fampanantenan'ny mpanjifa tsotra: Manampy anao hitombo izahay. Mpamboly anaty sy ivelan'ny trano - Fitaovana zaridaina - Fitaovana fanaovan-tany - Mpamboly - Vilany voninkazo
Cusano's Bakery Manufacturer Vokatra amin'ny sakafo Vokatra mofo sy mofomamy Cusano's Bakery dia fiankohofana mofo misy fianankaviana faha-5, manampahaizana manokana amin'ny vokatra mangatsiaka. Cusano's dia nanomboka nanamboatra mofo tao New York tamin'ny 1907 taorian'ny nahatongavany avy tany Italia. Ny toeram-pivarotan'i Cusano's Bakery dia fanjakan'ny zavakanto 250,000 3 sq.Ft. faritany any South Florida. Izahay dia SQF antoko faha-150 voamarina sy voamarina miaraka amin'ny naoty tsara. Mamokatra karazana mofo XNUMX mahery izahay izao. Izahay dia mitazona rafi-panafody marobe famokarana mba hamokarana mofo Artisan hearth & mofo voaendy / lozabe / mofo / horonana. Izahay izao dia mizara ny vokatray mangatsiaka manerana an'i Etazonia, Karaiba, Amerika afovoany ary atsimo. Mofo mangatsiaka - Mofo vaovao - Vokatra Pastry
DermaSensor Manufacturer Siansa fiainana sy haitao fitsaboana Fitaovana Dermatology DermaSensor dia orinasam-pitsaboana haitao ara-pahasalamana izay namolavola sy nanao varotra fitaovana manara-penitra mora vidy sy mora vidy izay ahafahan'ny mpitsabo manombana ny aretin-koditry ny marary amin'ny risika homamiadana ao anatin'ny segondra. Ny fitaovana dia mampiasa spectroscopy manaparitaka elastika patanty ary algorithm fianarana-milina mba hanomezana risika avo kokoa na valim-pifidianana ambany noho ny lesoka amin'ny hoditra. Fitaovana fitiliana homamiadan'ny hoditra tanana - Famantarana ny homamiadan'ny hoditra - Melanoma - Fitaovana Dermatolojia - Fitaovana fitsaboana
DiSTI Corporation Service Provider Teknolojian'ny fampahalalana Fampiofanana virtoaly sy lozisialy Manana foibe any Orlando, Florida ny DiSTI Corporation dia mpitarika manerantany amin'ny vahaolana fanofanana virtoaly sy fitaovana fampandrosoana ny HMI nandritra ny 25 taona. Simulator momba ny sidina - Simulator fiofanana - Fampiofanana virtoaly 3D - Fiofanana momba ny siansa fiainana - Fitaovana fiofanana virtoaly mekanika
Doc-Solutions - Secure Your Documents Service Provider Teknolojian'ny fampahalalana Teknolojia fiarovana Document We secure your documents na dia aorian'ny fizarana aza! Amin'izao tontolo ankehitriny izao, ny antontan-taratasinao dia azo idirana amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fitaovana rehetra. Ary tsy misy fiarovana azo antoka, na iza na iza. Ny fanamby: arovy daholo ny antontan-taratasinao amin'ny fitaovana rehetra. Ny vahaolana: Doc-Secure dia afaka miaro ny mombamomba anao amin'ny fitaovanao sy ny tamba-jotra rehetra, na amin'ny fitsaharana na amin'ny fitaterana. Doc-Secure dia miasa tsy misy fangarony amin'ny kapila mafy, mailaka ary fitehirizana rahona. Satria mora ho an'ny olona rehetra ny miditra amin'ny fisie anao, na aiza na aiza, dia mora aminao ihany koa ny miaro ny rakitrao na aiza na aiza. Fanaraha-maso ny zon'ny nomerika nomerika - Fiarovana ny antonta-taratasy - Teknolojia fitantanana antontan-taratasy - Teknolojia fiarovana antontan-taratasy - Encryption - Fandaharana manokana sy fampidirana - Fakan-kevitra momba ny teknolojia
Douglas Washing and Sanitizing Systems Manufacturer Fitaovana sy kojakoja indostrialy Fanomanana sakafo Manana traikefa mihoatra ny 40 taona i Douglas ary Sanitizing dia mpitarika indostrialy amin'ny fanomezana vahaolana fanadiovana sy fanadiovana mahomby sy mahomby. Manampy amin'ny fanalefahana ny loza mety hitranga amin'ny fiarovana ny sakafo isika amin'ny alàlan'ny rafitra manasa sy manadio ireo kaontenera, fitoeran-javatra, ary ireo faritra mety hivoaran'ny fahalotoana. Manam-pahaizana manokana amin'ny indostrian'ny fanodinana sakafo, zava-pisotro, rongony ary fizarana, Douglas dia manome maodely maherin'ny 80 ho an'ny fitaovana fanadiovana mandeha ho azy. Ny fitaovana rehetra dia mahafeno ny fenitra farany an'ny FSMA. Ny toerana fanasan-damba sy fanadiovana Douglas dia manolotra fanamboarana, fivoriambe ary fanandramana mivelatra. Io tontolo iainana io dia miantoka ny kalitao, manamafy ny fenitra fiarovana avo lenta ary mampiseho ny fahavononantsika hametraka ny mpanjifanay ho lohalaharana. Rafitra fanasan-damba mandeha ho azy - Rafitra fanadiovana mandeha ho azy - Fitaovana famokarana sakafo sy zava-pisotro - Fitaovana famokarana Nutracease
DRV Institute of Management Service Provider Serivisy ara-bola sy matihanina Fiofanana sy fanamarinana Izahay dia manam-pahaizana momba ny fandraharahana manerantany manome fahaiza-manao sy paikady mahomby hanampiana ireo tompona orinasa hitombo. Manana harena an-tanana amin'ny traikefa amin'ny sehatry ny fitantanana izahay. Mampianatra ny fahaiza-mitantana mifandraika amin'izany izahay mila mitantana ny orinasanao amin'ny fomba mahomby sy mahomby. Ny sehatry ny fahaizanay dia misy ny fampiofanana momba ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny consultation & ny coaching amin'ny asa aman-draharaha, ny fanampiana ireo mpandraharaha hanomboka / hamindra ireo orinasa any Florida sy ny fomba hanitarana ny sehatra iraisam-pirenena, fiarovana sy fahadiovana ara-tsakafo ary fanofanana ho an'ny mpiasa. Ekipa mpikarakara asa (mpitantana) sy matihanina amin'ny fanabeazana manana diplaoma diplaoma ary manana traikefa 20 taona mahery izahay. Sampan-draharaha momba ny fitantanana fitantanana amin'ny asa fandraisam-bahiny sy orinasa tena ilaina - Fampiofanana momba ny serivisy ho an'ny sakafo - Fanofanana momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny - fiofanana ho an'ny mpanjifa - fiofanana ho an'ny mpiasa
Ecologel Solutions, LLC Manufacturer Simika sy Petrochemical Fambolena simika Ny Ecologel dia manana traikefa 30+ taona manome vahaolana vaovao momba ny fitantanana ny hamandoana amin'ny tany, ny sakafo mahavelona, ​​ny biostimulants miorim-paka, ny mpanazava ny farihy ary ny fifehezana ny vovoka amin'ny arabe. Anisan'izany ny vokatra: Hydretain® - vahaolana humectone hygroscopic izay manampy ny zavamaniry hampiasa ny hamandoana amin'ny tany izay ho very tsy ho etona intsony. Esory ireo toerana maina, ahena ny lo, ampitomboina ny vokatra, manatsara ny fitsimohan'ny voa, ary mampihena be ny fitakiana rano ho an'ny ahitra, haingon-trano, ary ny fambolena. CytoGro® - biostimulant miorim-paka avy amin'ny ahidrano izay mampitombo ny faka sy ny fitomboan'ny sisiny nefa tsy miteraka fitomboana ambony loatra. Bakteria Aqua-T ™ Pond - bakteria misy voajanahary mba hanazavana ny rano sady mampihena ny fotaka sy ny fofona. GelTrak® Dust Suppressant - mampiasa ny hamandoana amin'ny tany sy ny habakabaka mba hampihenana ny vovoka sy hampihena ny fandroana rano amin'ny vovoka. BioPro® Technologies - andalana vokatra vokatra sakafo zavamaniry, fonosana micronutrient ary vokatra fanatsarana ny tany. Fiarovana ny rano amin'ny fambolena - Micronutrients misy ranoka - Biostimulants misy ranoka - Vokatra fanaraha-maso algoma - Additives amin'ny tany
Embry-Riddle Aeronautical University Service Provider Institution Educational Sekoly sidina fanofanana fiaramanidina sy teknolojia Embry-Riddle Aeronautical University no oniversite lehibe indrindra sy nahazo fankatoavana erantany miaraka amin'ny fifantohana amin'ny habakabaka, fiaramanidina, solosaina ary teknolojia, fiarovana sy faharanitan-tsaina ary indostria ampiharina Applied. Ao amin'ny campus campus misy anay roa any Etazonia, ny iray any Arizona ary ny iray any Florida, ireo mpianatrao dia tena voaomana tsara, ka ny 95% dia miasa amin'ny indostrian'izy ireo ao anatin'ny herintaona nahazoana diplaoma. ny Embry-Riddle Aeronautical University Ao amin'ny Singapore no misy ny campus Asia, ary manolotra tapa-potoana, fandaharam-pianarana natambatra natokana ho an'ireo matihanina miasa. Space - fiaramanidina- Fampianarana momba ny solosaina sy ny teknolojia- Fiofanana momba ny fiarovana sy faharanitan-tsaina ary siansa ampiharina
Enterprise Florida Service Provider Fikambanan'ny fampandrosoana toekarena Business Development Manova ny tontolon'ny fampandrosoana ara-toekarena any Florida. Enterprise Florida, Inc. (EFI) dia fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana sy ny mpitondra fanjakana Florida ary izy no fikambanana fampandrosoana ara-toekarena lehibe indrindra ho an'i Florida. Ny iraka ataon'ny EFI dia ny hanitatra sy hampizarazara ny harinkarem-panjakana amin'ny alàlan'ny famoronana asa. Ny EFI dia miasa miaraka amin'ny tambajotra mpiara-miasa amin'ny fampandrosoana ara-toekarena manerana ny firenena ary vatsian'ny fanjakana sy ny orinasa tsy miankina. EFI no orinasam-panjakana voalohany amin'ny fampandrosoana varotra sy fanondranana manohana orinasa maherin'ny 60,000 FL. EFI koa dia manohana orinasa bitika sy vitsy an'isa amin'ny alàlan'ny programa renivohitra, mampiroborobo an'i Florida ho toeram-pivarotana lehibe. Enterprise Florida mamorona orinasa vaovao ary miasa hitazomana sy hanitatra ny efa misy. Ny EFI dia mifantoka amin'ireo sehatry ny indostria ireo: fiaramanidina & aerospace, siansa fiainana, teknolojia fampahalalana, fiarovana & fiarovana an-tanindrazana, angovo madio, serivisy ara-bola sy matihanina, famokarana sy ny sisa. Fampandrosoana ara-toekarena - Fampandrosoana orinasa - fanondranana - varotra iraisam-pirenena - fitazonana - fandraisana mpiasa
Enzymedica Manufacturer Siansa fiainana sy haitao fitsaboana Vokatra fahasalamana sy hatsarana Niorina tamin'ny 1998 tany Florida USA, Enzymedica dia ny marika 1 an'ny anzima tena be mpividy mifototra amin'ny tahirin-kevitra momba ny fivarotana antsinjarany SPINS tsy miankina ao amin'ny fantsom-pivarotana voajanahary. Nandritra izay folo taona lasa izay, ny Digest Gold dia manohy mitana ny laharana ho vokatra anzima mpamidy # 1 amidy indrindra miaraka amin'ny Teknolojia Thera-blend ™ miavaka. Ny orinasa dia nanitatra ny portfolio-ny ankoatry ny vokatra azo avy amin'ny anzima mba hamaliana ny fangatahana tsy mitsaha-mitombo ataon'ireo mpanjifa izay mitady safidy mahasalama kokoa amin'ny fahasalaman'ny digestive sy ny fahasalaman'ny vatana. Fahasalamana voajanahary voajanahary - Enzyme - Detoxification - Famenon-tsakafo - Fanadiovana - Fanampiana ny tsimatimanota
etherium® by E-Stone Manufacturer Fananganana fitaovana Vokatra vita amin'ny injeniera Nandritra ny 20 taona niainana ambanin'ny fehin-kibo, dia nandroso ny fomba fanangonam-bidy sy ny fizotran'ny fanamboarana vaovao hitondra ny mpanjifa ankehitriny izay tadiavin'izy ireo, rehefa tadiavin'izy ireo izany. NY etherium® By E-Stone Ny habakabaka dia manana endrika tsy dia fahita firy voapaika avy amin'ny toeram-pitrandrahana voafantina nefa vita hatrany amin'ny 78% ireo fitaovana averina aorina ho an'ny mpanjifa, mitondra anao ny vokatra avo lenta indrindra miaro sy mitahiry ny loharanon-karena eto an-tany. etherium® Ny velarana dia mahatohitra hafanana, tasy ary tsy mahasosotra ary tsara kokoa noho ny hatramin'izay miaraka amin'ny Teknolojia Microban® Antimicrobial 24/7 namboarina. TREND Group koa dia mpitarika manerantany amin'ny famokarana mosaic vera miloko, verinia venetian, ary tesserae ravina volamena. Miaraka amin'ny sehatry ny famokarana sy fivoriambe manerana ny kaontinanta efatra sy firenena maherin'ny 50, TREND Group dia afaka mitondra fitaovana avo lenta avo lenta avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ao amin'ny tranonao na orinasa. Vato vato vita engineera - Countertops - Flooring - rindrina sy valindrihana valindrihana - Etherium - Fitaovana fananganana trano - Fanavaozana ny varotra sy ny fonenana
Export-Import Bank of U.S. governemanta Serivisy ara-bola sy matihanina Famatsiam-bola fanondranana Ny EXIM dia maso ivoho federaly mahaleo tena izay mampiroborobo sy manohana ny asa amerikanina amin'ny alàlan'ny fanomezana trosa fanondranana mifaninana sy ilaina hanohanana ny varotra entana sy serivisy amerikana ho an'ireo mpividy iraisam-pirenena. Ny EXIM matanjaka dia afaka mampitombo ny kianja filalaovana manerantany ho an'ireo mpanondrana any Etazonia rehefa mifaninana amin'ireo orinasa vahiny izay mahazo fanampiana avy amin'ny governemantany izy ireo. Ny EXIM koa dia mandray anjara amin'ny fitomboan'ny harinkarena amerikana amin'ny alàlan'ny fanampiana amin'ny famoronana sy fihazonana asa an'aliny maro amin'ny fanondranana orinasa sy ireo rojom-pamokarana manerana an'i Etazonia. Tao anatin'izay taona faramparany izay, manodidina ny 90 isanjaton'ny totalin'ny fanomezan-dàlan'ny masoivoho no nanohana mivantana ireo orinasa kely. Fiantohana fampindramam-bola fanondranana - Kapitaly miasa amin'ny fanondranana - antoka ara-bola amin'ny fampindramam-bola - indram-bola arahin'antoka - Famatsiam-bola
Falcon's Creative Group Service Provider Serivisy ara-bola sy matihanina Fampivoarana ny Park Park Falcon's Creative Group dia herinaratra iraisam-pirenena manampahaizana manokana amin'ny famoronana traikefa manitrika. Nandritra ny roapolo taona lasa, ny asantsika dia nampiroborobo ny fitambaran'ny fifehezana teknolojia farany ambony, ny famolavolana manan-tsaina, ny famokarana atiny nomerika mavitrika ary ny fampandrosoana ny vokatra vaovao. Ny orinasa dia misy fizarana telo: FalconTreehouse's Treehouse, FalconMedia nomerika, ary FalconFahazoan-dàlana. FalconTreehouse's Treehouse dia manova ny habaka amin'ny alàlan'ny serivisy famolavolana toy ny drafitra maoderina, ny sary an-tsary momba ny maritrano, ny famolavolana birao orinasa ary ny endrika traikefa. FalconNy Digital Media dia mamokatra traikefa an-tsokosoko miavaka amin'ny alàlan'ny fandrosoana farany amin'ny effets visuels (VFX), virtual reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality (MR), audio design, interactive, and software development. FalconNy fahazoan-dàlana dia manome vokatra vaovao marobe, ao anatin'izany ny vahaolana simia mifandraika amin'ny fahatokisana avo lenta, ny teknolojia ifanakalozana, ary ny toetra ara-tsaina. Famolavolana lohahevitra Park - Famokarana atiny - Famolavolana valan-drano - Fandrafetana ny Master
FIU Online - eLearning Services anjerimanontolo Institution Educational Fianarana ankapobeny FIU Online no sampana fianarana an-tserasera ao Florida International University. Nandritra ny 20 taona mahery dia teo an-tsoratry ny famolavolana taranja nomerika izahay. Androany dia manolotra diplaoma an-tserasera maherin'ny 100 an-tserasera izahay ary manompo mpianatra miisa 42,000, ary mahazo ny laharam-pirenena ambony amin'ny kalitao sy ny fidirana izy ireo. SAINGY FIU Online mampivelatra fianarana an-tserasera avo lenta ihany koa ho an'ny indostria maro karazana. Ity no azonay atao ho anao: Famokarana atiny fianarana: Amin'ny fijerena ireo fironana farany amin'ny fidirana an-tsehatra, ataontsika velombelona ny foto-kevitra. Fakan-kevitra momba ny fampandrosoana matihanina: ampifanarahanay amin'ny orinasanao ny fanazaran-tena an-tserasera mba hiantohana ny fahombiazan'ny ekipanao. Famolavolana torolàlana: Ireo manampahaizana manokana eto amintsika dia tsy vitan'ny hoe manaraka ny haitao mafana indrindra misy ihany fa miaraka amin'ny fikarohana farany amin'ny fianarana lavitra koa. Famolavolana sary: ​​mikarakara ny hatsaran'ny maso ivoho miankina amin'ny sehatra ilaina amin'ny sehatry ny indostria izahay. Multimédia: mamokatra horonantsary, sary ary feo misy ifantohan'ny mpianatra izahay. Fandalinana amin'ny oniversite ankapobeny - Fandaharam-pianarana any ivelany - Andrim-pikarohana
Flame Boss - Controllers & Thermometers Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra fandrahoan-tsakafo any ivelany Flame Boss ny mpanara-maso ny mari-pana amin'ny famonoana arina sy ny mpifoka dia mahatonga anao ho mpitaingin-tsoavaly tsaratsara kokoa. Hena malefaka sy mando misy setroka miaraka amin'ny fifehezana ny mari-pana marina sy miverimberina ao amin'ny mpifoka sigaranao araka ny natoron'ny natiora - ambany sy miadana. Ampidiro fotsiny, apetraho dia hadinoy. Flame Boss maka azy avy any amin'ny fifehezana ny hafanana miaraka amin'ny blower izay manidina ambony sy midina, raha manadihady ny mari-pana anatiny ny fizahana hena mba hahafantaranao rehefa mifoka tanteraka izy io. Ny thermomèteran'ny wifi vaovao dia afaka manara-maso ny mari-pana efatra indray mandeha ao anaty vilaninao, ao anaty lafaoro, fahandroana miadana ary maro hafa. Manome anao fanomezana mora, azonao atao ny mijery ny mari-pana anao na aiza na aiza misy anay Flame Boss fampiharana misy amin'ny Android sy iOS. Thermometera fandrahoan-tsakafo - Controller amin'ny mari-pana - Fitaovana mpifoka sigara- Fandrahoana ivelany- BBQ - Sensors amin'ny maripana
Florida A&M University MMERI anjerimanontolo Institution Educational Fianarana ankapobeny Ny Florida A&M University Medical Marijuana Education and Research Initiative (FAMU-MMERI: http://mmeri.famu.edu), notarihin'i Dr. Patricia Green-Powell (Dr. Charles A. Weatherford Principal Investigator), dia mandray anjara amin'ny 2021 Fampirantiana ny varotra iraisam-pirenena Florida (16-18 martsa). Ny fampirantiana dia fampisehoana virtoaly misy sehatra maro an'ny vokatra sy serivisy itarika an'i Florida. Ny FAMU-MMERI dia natsangana tamin'ny taona 2018 mba hampianarana ny vitsy an'isa momba ny marijuana hampiasaina amin'ny fitsaboana ary ny fiantraikan'ny fampiasana marijuana tsy ara-dalàna amin'ny vondrom-piarahamonina vitsy an'isa. Ny famatsiam-bola dia omen'ny Departemantan'ny fahasalamana Florida amin'ny alàlan'ny torolàlana an'ny Florida Legislature. Patanty sy fikarohana momba ny fahazoan-dàlana momba ny vokatra - Fandaharam-pianarana any ivelany
Florida Atlantic University anjerimanontolo Institution Educational Fianarana ankapobeny Florida Atlantic University, natsangana tamin'ny 1961, dia nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny varavarany tamin'ny 1964 ho oniversitem-panjakana fahadimy ao Florida. Androany, ny Oniversite dia manompo mpianatra maherin'ny 30,000 mpianatra nahazo diplaoma ary nahazo diplaoma manerana ny oniversite enina atsinanan'ny morontsiraka atsimo atsinanan'i Florida ary voasokajy ho anjerimanontolo ambony amin'ny alàlan'ny US News and World Report. FAU dia andrim-panjakana mavitrika sy mavitrika, tapa-kevitra ny handroso ho lohalaharana amin'ny fanavaozana sy ny vatsim-pianarana. Tao anatin'izay taona lasa izay, ny oniversite dia nampitombo avo roa heny ny fandaniam-pikarohana ary nihoarany ny mitovy amin'ny tahan'ny zava-bitan'ny mpianatra. Sahy, be zotom-po ary vonona handray an'izao tontolo izao ireo mpianatsika. Fandalinana amin'ny oniversite ankapobeny - Fandaharam-pianarana any ivelany - Andrim-pikarohana
Florida Export Finance Corporation (FEFC) Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Serivisy ara-bola sy matihanina Famatsiam-bola fanondranana The Florida Export Finance Corporation (FEFC) noforonin'ny State of Florida tamin'ny taona 1993 ho orinasa tsy mitady tombom-barotra miaraka amin'ny fahefana hanitatra ny asa sy ny fidiram-bola azon'ny mponina ao Florida amin'ny fampitomboana ny fanondranana entana sy serivisy vokatry ny fanampiana nomen'ny FEFC an'ireo orinasa Florida. Fanolorana vaovao, fanampiana ara-teknika ary consultant. Na izany aza, ny fanampiana ara-bola amin'ny endrika antoka indram-bola dia ny serivisy voalohany natolotry ny FEFC. Ny antoka dia miavaka amin'ny fifanakalozana nefa matetika no amidy ho toy ny tsipika fampindramam-bola mihodina. Ho fanampin'izay, ny FEFC dia mpandray anjara amin'ny Fandaharam-pahefana fampiroboroboana ny faritra ivelany (REPP) an'ny Banky Export Import any Etazonia (Bank EX-IM) ary manome ny mpanondrana Florida fidirana amin'ny programa fanampiana fanondranana natolotry ny EX-IM Bank sy SBA. Ny serivisy dia misy fonosana ho an'ny banky EX-IM Bank sy SBA antoka kapitalin'ny asa fanondranana, ary programa fampindramambola, fiantohana ary fiantohana hafa natolotry ireo masoivohon'ny governemanta amerikana ireo. Guarantees fampindramambola - Vola fanondranana - Renivohitra miasa - Famatsiam-bola kely - Fakan-kevitra momba ny asa - Torohevitra teknika - fanampiana ara-bola
Florida Institute of Technology anjerimanontolo Institution Educational Fianarana ankapobeny The Florida Institute of Technology (Florida Tech) dia oniversite tsy miankina, onenana, mazoto amin'ny fikarohana, manome dokotera, oniversite teknolojia any Melbourne any amin'ny "Space Coast" any Florida. Florida Tech dia natsangana tamin'ny 1958 tamin'ny fiandohan'ny Space Race izay hamaritra tsy ho ela ny morontsiraka Atlantika Florida ary hanintona an'izao tontolo izao. Ankehitriny, miaraka amin'ireo nahazo diplaoma maherin'ny 60,000, Florida Tech dia laharana eo amin'ny ambaratonga 5 isan-jaton'ny andrim-pianakaviana 20,000 2020 manome mari-pahaizana ambony amin'ny anjerimanontolo eran-tany 21-100. Florida Tech dia manolotra mari-pahaizana momba ny fiaramanidina sy ny fiaramanidina, ny injeniera, ny informatika ary ny cyber, ny asa aman-draharaha, ny siansa ary ny matematika, ny haitao, ny psikolojia, ny fanabeazana ary ny fifandraisana. Mpianatra avy amin'ny firenena maherin'ny XNUMX no misafidy ny hianatra amin'ny alàlan'ny fomba fiasa miasa sy miorina amin'ny tetik'asa Florida Tech. Ny fikambanana dia misafidy ny Florida Tech ho an'ny fikarohana, tetik'asa capstone, asa aman-draharaha ary torohevitra momba ny fahafaha-manao asa. Siansa - Teknolojia - Injeniera - Matematika (STEM) Fianarana mifantoka - Fandaharam-pianarana ho an'ny mpianatra vahiny
Florida International University's English Language Institute anjerimanontolo Institution Educational Fianarana ankapobeny Ny iraka ataontsika: manome torolàlana amin'ny teny anglisy ho an'ny olona rehetra nifidy ny Anglisy ho fampitaovana ho an'ny fikatsahana haitao na ho matihanina ary hampiroborobo ny fahatakarana iraisam-pirenena sy ny kolontsaina. Fandalinana amin'ny oniversite ankapobeny - Fandaharam-pianarana any ivelany - Andrim-pikarohana
Florida Ports Council Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Fotodrafitrasa sy fitaterana Economic Development The Florida Ports Council maneho ny seranan-tsambo any anaty rano 14 any Florida, manome mpitarika amin'ny alàlan'ny feo iaraha-mientana amin'ny sehatry ny fanentanana amin'ny fanjakana sy federaly, fikarohana ary data, ary marketing sy fifandraisana. Florida dia manana rafitra seranan-tsambo miorina tsara izay misy fifandraisana matanjaka an-dranomasina amin'i Karaiba sy Amerika Latina, ary koa tsena iraisam-pirenena maro hafa. Io no fanjakana tokana amerikana misy toerana misy seranan-tsambo amin'ny zotra lehibe roa - ny Atlantika sy ny Helodrano, mamela ny orinasa any Florida na mampiasa fotodrafitrasa Florida hahatratra ny toerana rehetra any Etazonia sy izao tontolo izao afaka andro vitsivitsy. Ny tombony hafa amin'ny fanaovana asa any Florida dia ny fidirana amin'ny tsenan'ny mpanjifan'ny fanjakana misy mponina 21 tapitrisa sy mpitsidika 126 tapitrisa isan-taona, hetra ambany, famatsiana mpiasa be dia be ary tahirinkevitra lehibe kokoa momba ny tranobe fananganana trano sy fizarana raha oharina amin'ireo fanjakana hafa any atsimo atsinanana. Fandefasana an-dranomasina - Fandraisana an-tanana ny karatra - Fivarotana fiara - fizarana-Terminal amin'ny alàlan'ny sambo mpiady - Advocacy an-dranomasina - filankevitra an-dranomasina
Florida Realtors® Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Serivisy ara-bola sy matihanina Varotra sy hofa fananana mifaka Florida Realtors® dia fikambanam-barotra matihanina ho an'ny mpampiasa trano sy manana alàlana ary miasa ho toy ny fikambanana manerana ny fanjakana ho an'ny fikambanana na birao Realtor® eo an-toerana sy isam-paritra any Florida. Ny maha-mpikambana dia an-tsitrapo ary misy ny mpiasa sy ny mpivarotra ary ny mpivarotra, ary koa ny mpanombatombana, mpanolotsaina trano, mpitantana fananana ary manam-pahaizana manokana momba ny fananan-tany sy ny orinasa mifandraika amin'izany. Florida RealtorsNy isan'ny mpikambana dia mahatratra 200,000 XNUMX ireo manana fahazoan-dàlana amina trano ary no fikambanana ara-barotra lehibe indrindra ao amin'ny Sunshine State. Ny foiben'ilay fikambanana dia ao Orlando, raha ny birao mpanao lalàna momba ny politikam-bahoaka kosa dia ao afovoan'i Tallahassee. Fikambanan'ny trano sy tany Florida - Serivisy famindran-toerana - Toeram-barotra - Trano fonenana - Serivisy fifantina toerana - Fampiasam-bola amin'ny varotra trano - Fampandrosoana indostrialy
Florida SBDC Network Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Fikambanan'ny fampandrosoana toekarena Torohevitra momba ny orinasa kely Ny varotra iraisam-pirenena ho an'ny orinasa any Florida dia mihanaka, ary ny Florida SBDC Network afaka manampy amin'ny fanomanana ny orinasanao amin'ny fanatontoloana. Ny serivisy iraisam-pirenena momba ny varotra iraisam-pirenena ekena ho an'ny firenena dia natao hampifandraisina amin'ireo orinasa manam-pahaizana izay vonona hitondrana any ivelany, vaovao-to-tsena, hitarika anao amin'ny famolavolana sy fampiharana paikady fitomboana iraisam-pirenena mahery setra. Ireo manam-pahaizana momba ny varotra iraisam-pirenena dia manana fitaovana, paikady ary fahaizana manokana hanampiana ny orinasanao hitombo sy hahomby any ivelany. Araraoty ny serivisy iraisam-pirenena momba ny varotra toy ny consulting iray sy ny fanofanana misy, izay misy ny Florida Export Series, International Trade Basics, ary International Trade Certificate Certificate. Hanampy anao izahay hahatakatra ny fototry ny varotra iraisam-pirenena, ny vokatra eto amin'ny firenena ary ny fepetra momba ny fahazoan-dàlana, ny fanangonana ny fikarohana eny amin'ny tsena ary ny fanomanana drafi-barotra Export. Marketing ivelany: Fampiofanana momba ny fandraharahana - Fampandrosoana drafitra fandraharahana - Torohevitra momba ny fividianana federaly
Florida State College at Jacksonville anjerimanontolo Institution Educational Fianarana ankapobeny Miaraka amin'ny tantara efa ela niorenan'ny fanomezana fanabeazana sarobidy sy avo lenta ho an'ny fiarahamoninay, dia mitana andraikitra lehibe hatrany ny FSCJ amin'ny famatsiana mpiasa any amin'ny faritra manana mpiasa mahay sy nahita fianarana ambony. Fandaharam-pianarana maherin'ny 160+, mari-pahaizana momba ny asa sy teknika ary fandaharam-pianarana fanabeazana mitohy atolotra amin'ny indostria be fangatahana toa ny Zavakanto, Humanities, Communication and Design, Business, Education, Health Science, Indostria, Manufacturing and Construction, Safety Public, Science , Teknolojia, Injeniera ary Matematika, Siansa ara-tsosialy sy fitondran-tena ary serivisy ho an'ny olombelona. Ho fanampin'ny programa diplaoma sy mari-pankasitrahana, ny FSCJ dia manolotra loharanom-pahalalana sy programa izay manampy amin'ny filan'ny mpiasa eo an-toerana ary manampy ny orinasa hampiasa vola amin'ny fanofanana, fanabeazana ary fampandrosoana ny mpiasa. Fiofanana momba ny orinasa - Fampianarana orinasa - Fampivoarana ny mpiasa - Fandaharam-pianarana any an-dafy - Diplaom-pianarana nahazo diplaoma sy nahazo diplaoma - Fampandrosoana orinasa
Florida State University anjerimanontolo Institution Educational Fianarana ankapobeny Iray amin'ireo oniversite fikarohana avo lenta an'ny firenena, Florida State University mitahiry, manitatra, ary manaparitaka fahalalana amin'ny siansa, teknolojia, zavakanto, mahaolona ary asa, nefa kosa mandray filozofia mianatra miorim-paka tanteraka amin'ny lovantsofina amin'ny zavakanto liberaly sy ny fisainana kritika. Ny oniversite mandray an'i FSU dia miorina amin'ny tranokalan'ny fampianarana ambaratonga ambony tranainy indrindra any Florida, ao amin'ny vondrom-piarahamonina izay manome fanontaniana maimaimpoana ary mandray ny fahasamihafana, miaraka amin'ny atletisma tompon-daka, ary toerana lehibe eo afovoan'ny renivohi-panjakana. Zava-misy faingana Niorina tamin'ny 1851; toerana fanabeazana ambony tranainy indrindra amin'ny fanasokajiana ny Komisiona Florida Carnegie: "Oniversite Doctorat: Asa fikarohana avo indrindra" mpianatra 41,717 isaky ny faritanin'i Florida sy firenena 131 Nahazo mombamomba ny olona vaoavao ho an'ny fahavaratra / fararano 2018: Fahalavoana: GPA 4.4 antonony; 31 isa salanisan'ny ACT natambatra; Isa SAT 1360 salan'isa fahavaratra: GPA 4.0 salan'isa; 27 isa salanisan'ny ACT natambatra; Isa 1260 salan'isa SAT. Fikarohana - Fanabeazana aorian'ny sekoly ambaratonga faharoa - Fandaharam-pianarana any ivelany
FloridaMakes Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Fikambanan'ny fampandrosoana toekarena Manufacturing FloridaMakes dia fiaraha-miasa amin'ny fanjakana, miankina amin'ny fanjakana, miankina amin'ny fanjakana sy fanjakana tsy miankina tantanan'ny fiaraha-miasa amin'ny fikambanan'ny mpamokatra faritra any Florida miaraka amin'ny iraka tokana hanamafisana sy hampiroborobo ny toekarenan'i Florida amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fifaninanana, ny vokatra ary ny fahombiazan'ny teknolojia amin'ny sehatry ny famokarana, miaraka amin'ny fanamafisana ny kely - sy orinasa salantsalany. Manatontosa izany amin'ny alàlan'ny fanomezana serivisy mifantoka amin'ny onjam-pitsipika telo: ny fananganana teknolojia, ny fampandrosoana talenta ary ny fitomboan'ny orinasa. FloridaMakes dia solontena ofisialin'ny tambajotra nasionaly fanitarana ny famokarana (MEP) ao amin'ny fanjakan'ny Florida, programa iray an'ny National Institute of Standards and Technology, masoivohon'ny departemantan'ny varotra amerikana. Fanombanana orinasa - Fandaminana paikady - fanafainganana teknolojia - fampandrosoana ny tsena iraisam-pirenena - fanofanana ny mpiasa - fanatsarana ny rojom-bidy - fanatsarana ny fizotrany
Genesis Water Technologies Manufacturer Clean1tp Ny rano sy ny fitsaboana rano Genesis Water Technologies dia mpitarika nahazo loka tamin'ny vahaolana amin'ny fisotroana rano & vahaolana amin'ny rano maloto. Manam-pahaizana manokana amin'ny fanompoana indostrialy sy ny fantson-drano any Etazonia sy manerana an'izao tontolo izao izahay amin'ny fiatrehana ny fanambin'ny kalitaon'ny rano amin'ny alàlan'ny vahaolana sy serivisy fitsaboana efa miorina amin'ny fanavaozana sy ny fiaraha-miasa. Serivisy fanodinana injeniera momba ny fanatsarana ny dingana - Fitsaboana rano amin'ny fako - Fitsaboana rano amin'ny fako indostrialy - Fandrefesana rano - haino aman-jery fitsaboana sy tondra-drano
Global Tampa Bay Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Fikambanan'ny fampandrosoana toekarena Business Development Global Tampa Bay dia fiaraha-miasa isam-paritra eo amin'ny Tampa Bay Economic Development Council, Pinellas County Economic Development ary ny Pasco Economic Development Council mba hampitomboana ny fahafaha-manao asa aman-draharaha iraisam-pirenena ho an'ireo orinasa ao amin'ny faritra ary hamidy ny faritra manerantany ho toeran'orinasa lehibe. amin'ny Global Tampa Bay, miara-miasa am-pireharehana amin'ireo mpiara-miombon'antoka ara-toekarena isam-paritra toa ny Tampa International Airport sy Port Tampa Bay ary koa ireo orinasam-panjakana federaly, fanjakana ary eo an-toerana mba hanome tetikady iraisampirenena. Ny iraka ataontsika - ny hisambotra ireo orinasa iraisam-pirenena mitady toerana misy orinasa voalohany any Etazonia ary hampitombo ny fahafaha-manao varotra iraisampirenena ho an'ireo orinasa eo an-toerana noho izany mampitombo ny fitomboan'ny harinkarenantsika. Varotra sy fampiasam-bola eran-tany ho an'ny Bay Tampa - Governemanta eo an-toerana - Fampandrosoana ara-toekarena - Famindran-toerana eo amin'ny orinasa - Fampiasam-bola mivantana any ivelany
Goodyear Rubber Products, Inc Manufacturer Fitaovana sy kojakoja indostrialy Ireo hidiran'ny hidradrika Goodyear Rubber Products Inc. dia mpizara sy mpamorona vokatra vita amin'ny indostria 73 taona, manana foibe any St. Petersburg, Florida misy toerana 6 manerana ny fanjakana. Mandefa eran'izao tontolo izao izahay avy amin'ny toerana misy anay miaraka amin'ny fandefasana avy amin'ireo orinasa mpiara-miasa amintsika manerantany. Afaka miasa miaraka amin'ny mpandefa entana tianao sy / na FedEx, DHL na UPS International araka ny takiana izahay na raha tsy manana mpampandroso ianao dia afaka manolotra iray ho anao izahay. Manolotra ny haavo teknika avo lenta indrindra izahay miaraka amin'ny mpiasa manana salan'isa mandritra ny 35 taona amin'ny fampiharana ny Indostria sy Hydraulika Tube & Couplings, Tubing, Fluid Sealing Products misy Gaskets sy Gasket Sheet fitaovana, O-Rings, Expansion Joints, High Temperature Textile ary ny vokatra fandefasana herinaratra ao anatin'izany ny V-Belts, Sheaves Belts Timing ary pulleys. Izahay koa dia manampahaizana manokana amin'ny Conveyor Belts sy kojakoja mifandraika amin'izany. Hose Hydraulika - Fitaovana hydraulic - Coupler Hydraulika - Tombo-kodiarana hydraulic - Fehin-kibo indostrialy - Conveyors - Hoses Fire
GreenTechnologies, LLC Manufacturer Simika sy Petrochemical Zezika sy teknolojia fitsaboana rano maloto GreenTechnologies dia manamboatra zezika miorina amin'ny biosolids miadana miadana amin'ny anarana hoe GreenEdge®. Ny zotra GreenEdge® an'ny vokatra dia mampiasa ny fizotran'ny fanodinana otrikaina patanty mba hanomezana zezika ny zon'ny mpamorona zezika mahomby. GreenTechnologies dia manolotra tsenan'ny zezika marobe, anisan'izany ny fambolena, ny tontolon'ny, turf matihanina ary ny antsinjarany na eto an-toerana sy any ivelany. Zezika - Fanodinana biosolida - fitantanana - Serivisy fitantanana sy fanariana ny tanàna
Grid Electrical Solutions Service Provider Clean1tp Angovo madio GRID ELECTRICAL SOLUTIONS (GES) dia orinasa amerikanina manana traikefa mihoatra ny 25 taona izay manolotra vahaolana angovo turnkey izay misy ny angovo azo havaozina farany, ny fizarana herinaratra ary ny andiany / andiany telo. Ny vahaolana manokana an'ny GES dia mamorona vahaolana Microgrids izay mampifandray ireo angovo azo havaozina sy nentim-paharazana ao anatin'ny rafitra fizaranao miaraka amin'ny tanjon'ny fampitomboana ny fahombiazana, ny fahamendrehana ary ny faharetan'ny rafitra ankapobeny ary mampihena ny vidin'ny mpanjifa. Ny orinasa dia manolotra serivisy hafa toy ny asa sy ny fikojakojana ary koa ny tolotra ara-bola izay misy ny fifanarahana fampanofana sy fividianana herinaratra (PPA) .GES dia mamolavola tetikasa amin'ireto sehatra manaraka ireto: fotodrafitrasa: Orinasa fifandraisan-davitra sy fifandraisan-davitra ara-barotra: foibe fiantsenana, banky ary manan-tsaina trano Indostrialy: Sakafo sy fisotroana fandraisam-bahiny: Hotely sy trano fandraisam-bahiny Andrim-panjakana: Campus, sekoly, hopitaly Governemanta: Kaomina Rafitra fampidirana angovo azo havaozina - Volavola rafitra fampidirana angovo azo havaozina - Herin'ny masoandro - Herin'ny rivotra - Fitantanana angovo - Fitaovana - Microgrids - fitehirizana angovo
H2O International Manufacturer Entana ny mpanjifa Fitaovana fanivanana rano Mpanamboatra rafitra fanivanana rano mampiasa haino aman-jery GAC sy KDF. Ny lisitry ny vokatra dia misy countertop, undersink, dispensers sy trano iray manontolo, ary koa, fitoeran-drano fanadiovana rano sy fandroana. Rafitra fanivanana rano - Sivan-drano momba ny rano - Fitaovana fampiasa amin'ny lakozia sy fauzety - Fitaovana fandroana fandroana fandroana - POU / POE Sivana rano
Hassell Free Exports, Inc. Distributor Fananganana fitaovana Ireo mpiorina amin'ny fananganana Niorina tamin'ny taona 1999, Vernon Hassell sy ny fianakaviany, izay nalaina avy amin'ny nosy Saba any Karaiba Holandey, dia manana sy miasa amin'ny Hassell Free Companies, Inc. any Palm City, Florida. Ny ifantohanay amin'ity Expo ity dia ny fitaovan'ny fananganana trano sy fanondranana maimaimpoana any Hassell. Izahay dia mitantana ny fividianana, ny fanorenan-trano ary ny fanamafisana ireo fitaovana fananganana trano sy kojakoja hafa ho an'ny tetik'asa fanorenana lehibe sy kely manerana ny nosy Karaiba. Manana tambajotram-mpamatsy lehibe izahay izay manolotra fitaovana marobe isan-karazany mamela antsika hanome loharano ara-potoana sy amin'ny vidiny mirary. Izahay koa dia manome fanampiana amin'ny lozisialy hahazoana ny fitaovana amin'ny fiafaràny amin'ny alàlan'ny sampana fandefasana anay. Ny tanjonay lehibe indrindra dia ny hanampy ireo izay ao amin'ny indostrian'ny fanorenana Karaiba miaraka amin'ny akora fanangonam-bokatra, na izany aza, mitady hatrany hiara-hiasa amin'ireo mpamatsy fitaovana fananganana afaka mifaninana amin'ny tsenanay izahay. Manantena izahay fa mankafy ny trano rantsan-kazo ianareo ary aza misalasala manontany amin'ny fanontaniana. Orinasa mpivarotra fanondranana - Fandefasana Karaiba - Fitaovana fanamboarana - Flooring - Varavarankely - Varavarana - Kabine - Fanavaozana ny trano -Fananganana trano
Help Hair Inc Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra fahasalamana sy hatsarana Ampio hanozongozona ny volo® ary ampio vitamina volo, ampiasao raikipohy All voajanahary ao anatin'izany ny Protein, miampy tena ilaina Biotin, Niacin ary B-12 izay vitamina very volo tsara indrindra manampy ny volo hitombo. Ny Protein Shake sy ny vitamina volo dia mamelona ny folon'ny volo avy ao anatiny mba hitomboan'ny volo haingana. Izahay no vokatra eken'ny dokotera # 1 ho an'ny volo. Mampiasà Help Hair® Shake isan'andro miaraka amin'ny Vitaminina fanampiana Hair®® ho an'ny volo salama sy feno tarehy. Efa 14 taona mahery no teny an-tsena ny vokatray ary manana mpanjifa faly 1000 izahay. Natolotry ny toeram-pitsaboana 400 momba ny dermatolojika sy ny fihenan'ny volo erak'izao tontolo izao. Ny Help Hair® System dia misy dingana 4 ho an'ny volo salama sy hoho tsara tarehy. Ny shampooing sy ny conditioner-nay dia miasa mba hanala ny sebum be loatra sy ny DHT amin'ny loha. Samy manana ny fambolena botanika izay rehefa tototry ny loha dia manampy amin'ny fampiroboroboana ny fitomboana mahasalama. Ny vokatra rehetra dia novolavolain'i Dr Shapiro miaraka amin'ny 30 taona niainan'ny Famerenana amin'ny laoniny ny volo. Famenon-tsakafo mahavelona amin'ny fitomboan'ny volo - shampooing - conditioner volo - fahaverezan'ny volo - otrikaina-fitsaboana amin'ny hoditra - vokatra collagen
Hernon Manufacturing Manufacturer Fitaovana sy kojakoja indostrialy Adhesives sy Sealants Hernon Manufacturing, Inc.® dia mamokatra adhesives avo lenta, tombo-kase, jiro fanasitranana UV LED ary rafitra famoahana marina. Hernon® dia mitazona trano famakiam-boky ahitana rakotra fanaovam-piraketana sy tombo-kase miavaka mihoatra ny 5000 ho fanampin'ny famoronana raikipohy namboarina hamahana ireo olana manokana amin'ny famokarana. Ny laboratoara simika feno ao an-trano dia miantoka ny fihodinana haingana amin'ny tetik'asa fanandramana sy fampandrosoana ary fizarana fitaovana fanamboarana eo an-toerana no ahafahan'ny Hernon® manangana, manompo ary mampiditra rafi-pamolavolana tsy manam-paharoa na dia ireo andinindininy tena mazava indrindra aza. Ity fampidirana ity dia manampy an'i Hernon® hanome ny mpanjifa vahaolana feno ho an'ny rindranasa tokana. Ny Hernon® Manufacturing dia manana foibe any Sanford, FL., Ary mitazona tamba-jotra tsy mitsaha-mitombo mpizara 100 sy toerana misy ny mpiara-miasa manerantany. Efa nalefa tany amin'ny firenena 60 mahery, Hernon® dia afaka manome vahaolana adhesive amin'ny asa famokarana na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Adhesives indostrialy - Sealants - Sealants kofehy - Vahaolana fanasitranana - Robots amin'ny famoahana adhesive - Sealants Gasket - fisorohana ny famoahana
Honeycomb Company of America Manufacturer Aviation sy Aerospace Fizarana fiaramanidina sy fiaramanidina Honeycomb Company of America dia mamatsy vokatra sy serivisy manana kalitao ho an'ny Indostria Aerospace nanomboka tamin'ny 1948. Ny orinasa dia manam-pahaizana manokana amin'ny seranam-piaramanidina mifamatotra amin'ny fampiasana vy amin'ny vy, vy amin'ny atin'ny tantely, ary fananganana mitambatra. Honeycomb dia orinasa mitambatra miorim-paka izay mirakitra hetsika enti-miasa momba ny injeniera, ny famokarana ary ny kalitao. Ny orinasa dia manana loharanon-karena hikirakira ny fanamboarana hanontana pirinty izay misy aerostrukture rehetra. Rehefa takiana, Honeycomb dia afaka mamadika ny vokatra injeniera izay tsy manana ny angona teknika takiana amin'ny fanamboarana. Ankoatry ny famokarana, ny Honeycomb dia manana fanamboarana fanamboarana izay mahazaka fanamboarana aerostructure isan-karazany. Raha mihoatra ny fetran'ny fanamboarana nentim-paharazana ny fanamboarana, ny ekipanay injeniera dia matetika afaka mamolavola sy manoratra paikady fanamboarana ho amin'ny fandefasana ny rafitra mifehy mety amin'izany. Amin'ny tranga maro, ny Honeycomb dia afaka manamboatra ampahany izay mety hitaky fanoloana lafo kokoa. Aerostructures - Honeycomb Core and Compedite mifamatotra - Nadcap Accredited - Metal ho an'ny Metal Compact Honeycomb mifamatotra amin'ny vy - Engineering injeniera momba ny fiaramanidina
Hosmed Inc Manufacturer Siansa fiainana sy haitao fitsaboana Hospital Equipment Hosmed Inc. dia namaritra ny fikarakarana feno amin'ny fanomezana fitaovana ara-pitsaboana, fitaovana fitsaboana, fitaovana laboratoara ary fanafody. Orinasa amerikana monina any Miramar, Florida izahay hatramin'ny 2009. Hosmed Inc. dia mpanamboatra fitaovam-pitsaboana avo lenta miaraka amina fomba hafa toy ny: Fanafody sy ny taovam-pisefoana, vahaolana amin'ny fikarakarana ny fiainana, ny kardia Diagnostika, ny fikarakarana zaza tsy ampy taona, ny fitarafana, ny X-Ray, ny fitsaboana IV, ny efitrano fandidiana, ny laboratoara, ny fanaka amin'ny hopitaly ary ny hafa mifandraika amin'izany. vokatra ho an'ny hopitaly, tobim-pitsaboana ary fitsaboana voalohany. Hosmed Inc. dia manana ekipa mpiasa manolo-tena hitondra fiofanana biomédical sy teknika ary fanohanana ireo mpizara anay manerana an'izao tontolo izao miaraka amin'ny tanjona hanampy azy ireo amin'ny fametrahana, ny fananganana komisiona ary ny fikojakojana ny fitaovantsika ara-pitsaboana. Ny vokatray dia aondrana betsaka any Amerika Latina, Moyen Orient, Afrika, Azia atsimo atsinanana. Anesthesia sy taovam-pisefoana, vahaolana momba ny fikolokoloana aina, kardiôdiagnostika Diagnostika, fikarakarana zaza tsy ampy taona momba ny reny, ultrasound, X-Ray, fitsaboana IV, efitrano fitsaboana
HospitalesMoviles.com Distributor Siansa fiainana sy haitao fitsaboana Fitaovana fitsaboana sy fitsaboana maika HospitalesMoviles.com drafitra, volavola ary fanatanterahana tetik'asa turnkey ara-pitsaboana sy mifandraika erak'izao tontolo izao - ny fanomezan-danja sy tanjonay dia ny hanome hopitaly modular haingam-pandeha haingana! Ireo tetik'asa ireo dia mety ho, Hopitaly an-tsaha mobile, prefabrika, hopitaly modular ary klinika. Hopitaly finday - tobim-pitsaboana finday - Hopitaly an-tsaha - Hopitaly PreFab Covid - Autoclaves sy solom-baravarana teknikan'ny fako medikaly - Integrator fitaovana fitsaboana
IBT Online Service Provider Teknolojian'ny fampahalalana Internet Marketing Hatramin'ny 2002, nifantoka tamin'ny fanampiana ireo orinasa hampivelatra ny orinasany iraisam-pirenena izahay. Ny programa Online Global dia manana rakitsoratra efa voaporofo izay manome fanondranana, varotra, marika ary fitomboana azo refesina ho an'ireo mpanjifan'ny orinasanay, amin'ny alàlan'ny fananganana tranokala fanao tsara indrindra, varotra an-tserasera sy varotra e-commerce iraisam-pirenena. Localization tranokala-Marketing amin'ny Internet an-tserasera
IMR Environmental Equipment Manufacturer Fitaovana sy kojakoja indostrialy Fitaovana fanaraha-maso ny rivotra sy ny entona IMR Environmental Equipment, Inc. mamolavola sy manamboatra mpandalina mpandoro. Manana fanatrehana manerantany isika. Izahay dia mamokatra fitaovana ho an'ny fanandramana tranokala haingana ary koa fitaovana CEMS ho an'ny fanadihadiana amin'ny toerana. Ireto misy ohatra vitsivitsy momba ny fampiasana tranga ho an'ny fitaovantsika: HVAC, Angovo, Fanaraha-maso ny fizotry, famokarana vera, zavamaniry herinaratra, sakafo, oniversite, na aiza na aiza no ilaina ny famakafakana ny gazy. Mpanadihady IMR - mpamantatra ny tondra-dronono - Mpanadihady momba ny gazy flue - mpanara-maso ny rivotra sy ny gazy - mpanara-maso kalitaon'ny rivotra - CEMS - mpandinika entona sy rivotra azo entina
Indian River State College anjerimanontolo Institution Educational Fianarana ankapobeny Amin'ny maha-mpitarika amin'ny fanabeazana sy ny fanavaozana, Indian River State College manova fiainana amin'ny fanolorana fanabeazana avo lenta, takatry ary azo idirana. IRSC dia oniversite feno nahazo fankatoavana hanome mari-pahaizana Baccalaureate, Degre Associate, ary mari-pahaizana momba ny asa sy ny teknika. Fanamarinana ara-teknika - bakalorea - Fandaharam-pianarana any ivelany
Industry Equipments Inc. Manufacturer Afo sy fiarovana Famonoana afo sy fitaovana famonjena Manompoa amin'ny fomba matihanina sy mitambatra amin'ny fizotran'ny indostria, mamonjy aina, mamonjy fotoana sy vola, manatsara hatrany ny fepetra ho an'ny hoavintsika amin'ny alàlan'ny fahombiazana sy ny fampitaovana faran'izay betsaka. Paompy kely (Fitaovana mpamono afo) - Fitaovana mpamonjy voina - Fitaovana kamiao mpamono afo - Fitaovana fanamboarana namboarina - Kamiao mpamono afo namboarina - fiara mpamonjy voina namboarina
Infinium Medical Manufacturer Siansa fiainana sy haitao fitsaboana Medical Equipment Niorina tany 2001, Infinium Medical dia mpamorona sy mpanamboatra fitaovana fitsaboana lehibe. Miorina any Etazonia, Infinium Medical manana laza manome ny teknolojia sy ny kalitao mitarika indostrialy. Manokana izahay amin'ny Monitor Patient, Anesthesia Systems, Tables fandidiana, Video Laryngoscope, Shockwave Therapy ary vahaolana amin'ny Telehealth. Ankoatra ny tsenan'i Etazonia, Infinium Medical manana tamba-jotra mpizara iraisam-pirenena midadasika, manodidina ny firenena 87. Fanaraha-maso ny marary Fitaovana fitsaboana - Capnography - EKG - Fanaterana fanafody fanatoranana - Latabatra fandidiana - Oxygène pulse
iQ Valves Manufacturer Siansa fiainana sy haitao fitsaboana Medical Equipment iQ Valves dia mpamokatra valizy solenoid fanaraha-maso mazava tsara izay manome vahaolana vita amin'ny injeniera ho an'ny fampiharana OEM. IQ dia mitazona patanty marobe ho an'ny fitaovana fanaraha-maso. Izahay dia mirehareha amin'ny teknikanay vaovao sy ny fotoana fanodinana haingana. iQ Valves Co. dia nampidirina tamin'ny 2005 taorian'ny traikefa an-taonany maro tamin'ny indostrialy famokarana sy solenoid tamin'ny anarana teo aloha Teknocraft Inc. Ny orinasa dia nanolotra serivisy famokarana sy injeniera mifandraika amin'ny teknolojia valizy solenoid ho an'ny fampiharana ara-pahasalamana, fitaovana ary indostrialy nanomboka tamin'ny 1984. ISO 9001: orinasa voamarina 2015. Valve Solenoid Control Valve - Valves proportional - Valves Solenoid - Fizarana fitaovana Ventilator
IRI, The CoSort Company Manufacturer Teknolojian'ny fampahalalana Big Data fitantanana sy fiarovana Niorina tamin'ny 1978, Innovative Routines International (IRI), a / k / a IRI, The CoSort Company, ISV fitantanana angon-drakitra amerikana ISV malaza amin'ny fanodinkodinana angon-drakitra haingana sy vahaolana fiarovana ny angon-drakitra kendrena. Manana foibe any Melbourne, Florida, IRI dia misolo tena ny tanàna 40 eran-tany. Ireo mpanjifan'ny IRI dia ao amin'ny indostria maro izay manana angona lehibe na saro-pady amin'ny loharano samihafa mba handrindrana, hiarovana, hanehoana na hanohanana. Powered by IRI CoSort na Hadoop maotera, ny sehatra fitantanana data IRI Voracity dia manambatra ny fahitana angon-drakitra, fampidirana, fifindra-monina, fitantanana ary famakafakana amin'ny vera tokana, naorina teo amin'ny Eclipse. Ny Voracity dia misy ny vokatra ao amin'ny IRI Data Manager [CoSort, Fast Extract, NextForm ary RowGen] ary ny IRI Data Protector [FieldShield, CellShield EE, ary DarkShield] suite mba hanomezana tahirin-kevitra momba ny tahiry marobe sy fanasokajiana, fanovana data haingana sy fifindra-monina, angona ETL fitahirizam-bokatra sy famolavolana angona, fanadiovana angon-drakitra ary fametahana PII, angona fitsapana azo antoka ary maro hafa. Tsiambaratelo momba ny data - fisorohana ny fisorohana ny data - fitantanana angon-drakitra lehibe - fametahana data - fisoratana anarana amin'ny lozam-pifamoivoizana ID - trano fitehirizana data - ETL - angon-drakitra fitsapana - GDPR - fitsikilovana orinasa - fifindra-monina data - fiarovana amin'ny cyber
Jacksonville Port Authority (JAXPORT) Service Provider Fotodrafitrasa sy fitaterana Port Authority Any amin'ny atsimo atsinanan'i Etazonia eo amin'ny sampanan-dalan'ny tambajotra misy ny lalamby sy ny làlam-pirenena, ny Jacksonville Port Authority (JAXPORT) no vavahady maneran-tany mankany Florida, firenena fahatelo lehibe indrindra ao amin'ny firenena. JAXPORT no seranan-tsambo lehibe indrindra any Florida ary iray amin'ireo seranan-tsambo fitaterana fiara lehibe indrindra ao amin'ny firenena. Mpitondra ranomasina am-polony no miantso ao amin'ny JAXPORT, manolotra anao ny fotoana fitaterana any amin'ny seranana 140 any amin'ny firenena 70 mahery. JAXPORT dia manolotra fitaterana tsy mandeha amin'ny alàlan'ny orinasam-pifamoivoizana miisa 100 sy fiaran-dalamby 40 isan'andro amin'ny alàlan'ny lalamby Class I CSX sy NS ary ny lamasinina isam-paritra FEC. Ny ekipa mpivarotra efa za-draharaha JAXPORT dia afaka manampy anao hanana drafitra manokana hanasoavana ny orinasanao. Mifandraisa aminay anio na hianaranao bebe kokoa momba ny tombotsoan'ny JAXPORT. Fandefasana an-dranomasina - fikirakirana karatra - fivarotana fiara - fizarana - Terminal amin'ny sambo fitsangantsanganana
Just Fur Fun Manufacturer Entana ny mpanjifa Pet Supplies Mety hahafinaritra be ny miakanjo! Ankehitriny rehefa mampiasa accessorize ianao dia afaka manao izany ve ireo namanao volo! Just Fur Fun® dia manana tsipika feno ho an'ny kanelina tsy manam-paharoa, zana-kazo, zanak'olombelona ary Equine vakana tanana; ka ny fiarahana miaraka amin'ny vozon'akanjo alika tonga lafatra ho azy ireo, miaraka amin'ny fehikibo mifanentana ho anao, dia hahafinaritra sy mora! Just Fur Fun® dia te-hanampy amin'ny famoronana fifamatorana manokana eo anelanelanao sy ny biby satria mino izahay fa ny fanehoanao ny fombanao manokana dia tokony hitohy amin'ny laoniny! Ny fehiloha vita amin'ny hoditra sy ny vozon'akanjo vita amin'ny lamba vita amin'ny hoditra dia voaravaka amboara-bolo vita amin'ny tanana mba hifanindriana, ary koa kojakoja mahafinaritra ho anao noforonina indrindra hifaneraserana! NY Just Fur Fun® Ny tsipika vokatra tsy manam-paharoa dia misy: collars pet, pet leashes, fehikibo hoditra, ary ho an'ny équine equine; browband vita amin'ny tànana vita amin'ny tanana, mamporisika ary mahazaka tadiny. rehetra Just Fur Fun® Ny zavatra vita amin'ny tanana dia 100% any Etazonia. Miomàna amin'ny oohs sy ahhhs satria izao ny fitsangatsanganana ao amin'ny valan-javaboary dia hitodika amin'ny lohanao miaraka amin'ny biby fiompy beaded anao sy ny kojakojan'ny olona! Tady alika vakana tanana - Tady alika vakana tanana - fehin-kibo vita tanana - firavaka vakana
Keiser University anjerimanontolo Institution Educational Fampianarana ho an'ny mpiasa, ny fahasalamana miaraka, ary ny asa lehibe manerantany At Keiser University, eto izahay hanampy anao hahomby amin'ny fanomezana ny fototra matihanina sy akademika ilaina hahatratrarana ireo tanjonao sy tanjonao. Niara-nanorina tamin'ny Dr. Arthur Keizer, Chancellor, miaraka amina mpianatra iray fotsiny 43 taona lasa izay, androany Keiser University no oniversite lehibe indrindra tsy mitady vola i Florida. Keizer dia eken'ny faritra Association of Colleges sy ny sekoly atsimo ho oniversite enina ambaratonga, manondro ny diplaoma avo lenta sy ny tombotsoan'ny fikarohana. Amin'ny maha mpikambana ao amin'ny Colleges tsy miankina sy oniversiten'i Florida Keizer dia manompo mpianatra mihoatra ny 20,000 21 amin'ny campus XNUMX any Florida izy. Keizer dia eken'ny Fikambanana Hispanika momba ny oniversite sy oniversite ho ivon-toeram-panompoana Hispanika. Keiser University dia manohy mpiara-miasa sarobidy amin'ireo mpampiasa, ny fiarahamonina, ary indrindra indrindra, safidy sarobidy ho an'ireo mpianatra matotra amin'ny fianarany sy ny asany. Mifandraisa amin'ny fandaharam-pianarana diplaoma Doctorat - Fahasalamana iraisana - Siansa teknika - fitantanana raharaham-barotra - teknolojia fampahalalana - fandraisana vahiny
KIZANDY Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra confectionery Kizandy, Orinasa amerikana dia natsangana tamin'ny taona 2010 mba hamorona andiana vokatra confectionary fonosina amin'ny kalon'ny mpamorona zava-baovao izay mahasarika ny mpanjifa manerantany. Nandany ny fotoananay izahay tamin'ny fikarohana, famolavolana ary famoronana vokatra misy tsiro mahafinaritra ary antso avo iraisampirenena. Ny fahafahantsika mamorona famolavolana fonosana vaovao dia nahatonga ny kalon'ny mpamorona loka. Izay nahazo tombony tamin'ny mpivarotra tamin'ny fitomboan'ny firenena 40 mahery! Candies tsy misy siramamy - Item amin'ny fanomezana vatomamy
Kushae by BK Naturals Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra fahasalamana sy hatsarana Kushae no laharam-pamokarana fahadiovam-po voajanahary # 1 ary noforonin'ny OB / GYN ... Kushae dia fikarakarana voajanahary daholo ao! OB / GYN - Fikarakarana ara-pahasalamana vehivavy
LatamXport LLC Distributor Entana ny mpanjifa Fitaovana fanomanana vonjy maika LatamXport LLC dia Orinasa manana mari-pahaizana voamarina vitsy an'isa. Manome fiomanana vonjy maika sy vokatra fanampiana vonjy maika izahay toy ny COVID-19 Fitaovana fitsaboana, Sandbags Sandless, telefaona zanabolana. Ireo vokatra ireo dia azo vidiana amin'ny sehatry ny governemanta, Orinasa madinidinika, sehatra tsy miankina sy daholobe, Fikambanan'ny tompon-trano, sekolim-panjakana sy tsy miankina, hopitaly, mpiady amin'ny afo, fananganana trano ary vondron'olona valiny vonjy maika. Fiomanana amin'ny vonjy taitra - Fanampiana ny voina - Fitaovana fitsaboana COVID-19 - Fonosana tsy misy fasika - Serasera satelita- Fangatahana sakafo maika- Famonoana moka amin'ny masoandro
Liquid-Vet by COOL PET Holistics Manufacturer Entana ny mpanjifa Pet Supplies Liquid-Vet® dia marika # 1 fampiasa amin'ny ranon-tsavony "nutrapy" ho an'ny biby fiompy izay matsiro kokoa, mora kokoa ary haingana kokoa noho ny pilina, vovoka ary chews eny an-tsena ankehitriny. Plus, Liquid-Vet® Formula dia vita any Etazonia ary manana antoka famerenam-bola. Fanampiana ara-pahasalamana sy fiompiana biby
LOKSAK Manufacturer Entana ny mpanjifa Fitehirizana ny vokatra manokana LOKSAK, Inc. an'ny Naples, Florida no mpamorona nyLOKSAK, OPSAK, SHIELDSAK ary CBRNSAK. Ny vokatray no hany kitapo fitehirizana azo tanterahina sy tantera-drano, porofo vovoka ary hamandoana azo zahana eny amin'ny tsenan'ny mpanjifa. Ny vokatray dia noforonina mba hitazomana ny atiny tsy ho voarohirohy amin'ny rano, saingy vetivety dia hita fa mahavita zavatra betsaka kokoa ilay kitapo. Tamin'ny taona 2006, rehefa nanambara ny fivoaran'ny vokatra ny mety hahatonga ny kitapo fitahirizantsika tsy hidiran'ny fofona ihany koa dia nanokatra vokatra vaovao izahay - kitapo maharitra OPSAK. Ireto kitapo misy fofona tsy misy fofona ireto dia mety tsara mba hitazomana ny vata fampangatsiahana tsy misy fofona mahery ary hitazomana ny bibidia tsy ho sakafo any amin'ny tobin'ny toby. LOKSAK mivarotra vokatra eny an-tsena isan-karazany toy ny fampiharana ny vokatray. Izahay dia mivarotra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny ankamaroan'ny tsena ivelany sy sivily ary koa ny sampan'ny miaramila, ny governemanta ary ny mpampihatra lalàna manerantany. Raha ny fitahirizana ambony no resahina, dia vonona izahay hiatrika ny fanamby lehibe manaraka. Kitapo fitehirizana azo ampiasaina - Kaontenera tsy misy rano - Shield matetika amin'ny radio - fitoeran-porofon'ny vovoka - fitoeran-porofon'ny hamandoana
Loos Naples Manufacturer Aviation sy Aerospace Fanamboarana sy fanamboarana fikarakarana fiaramanidina Mpanome serivisy feno fametahana milina manokana, tady tariby, fametahana tady tariby, fitaovana ary fivoriambe. Fametahana milina manokana - Tady tariby - Fitaovana tariby tariby-Fandrefesana fihenjanana - Mpanapaka tariby - Pulley - amboara
Lotus Bio-Mineral Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra fahasalamana sy hatsarana Miaina fiainana madio sy tsara isan'andro ary amin'ny toe-javatra rehetra miaraka amin'ny fahatokisana ny mitafy vokatra azonao itokisana. Ny kosmetika mineraly biolozy hatsaran-tarehy lotus madio dia noforonina tsara ary novokarina tsy misy poizina poizina. Mihazona ny tenantsika amin'ny fenitra mangarahara avo kokoa miaraka amin'ny fahatsoran'ireo singa maro karazana sy mifototra amin'ny kalitao izahay. Amin'ny alàlan'ny fanavaozana manan-tsaina, fanarahan-dalàna ary fampiroboroboana, ny Clean Beauty Movement dia mampifandray ireo rojom-panomezana, mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fanarahan-dalàna ary mahatratra ny tanjona napetraky ny mpanjifa sy ny marika. Cosmetika- Vokatra hatsaran-tarehy - Vokatra fikolokoloana hoditra
Madico, Inc. Manufacturer Automotive Fandokoana vera sy lamina Madico, Inc. dia mpanamboatra mpamokatra horonantsary, rakotra, metallizing ary vahaolana amin'ny laminate. Ny vokatra injenieran'ny madico dia mihoatra ny andrasana amin'ny indostria manerantany misy ny fiara, maritrano, fahasalamana, aerospace ary fitaovana elektronika ho an'ny mpanjifa. ProtectionPro® no rindrina farany mpiaro sy lamba mpiaro ny vatana amin'ny fitaovana rehetra. Ny rafitra fanapahana fangatahana sy rindrambaiko miorina amin'ny rahona izay misy maodely maherin'ny 20,000 dia manome antoka fa ny mpivarotra dia afaka manarona ny fitaovana rehetra manomboka amin'ny famoahana farany ka hatramin'ny modely lova. Mpivarotra eran-tany an'arivony no mitondra ProtectionPro. Ny foiben-toerany any Tampa Bay, Florida., Madico dia mametraka ny mpanjifa ho lohalaharana amin'ny alàlan'ny famokarana sy fiaraha-miasa. Amin'ny alàlan'ny fikarohana sy fivoarana matanjaka, Madico dia mahay mandroso amin'ny fampiharana vaovao hamaha ny olan'ny mpanjifa. Hatramin'ny 1903, Madico dia nanao ny asan'ny mpisava lalana miaraka amina fanoloran-tena tsy manam-paharoa amin'ny kalitao. Palitao sarimihetsika - palitao varavarankely - firakotra fitaratra- voasarimakirana - fitaratra varavarankely
Magic Tilt Trailers, Inc. Manufacturer Vokatra sy haitao an-dranomasina Làlan'ny sambo sy faritra Hatramin'ny 1953, Magic Tilt Trailers, Inc dia namokatra mpamily sambon-kalitao avo indrindra hatrany amin'ny sanda miavaka. Ny taona niainana, fanatsarana kalitao mitohy, ary kilometatra an-tapitrisany maro amin'ny tranofiaranay dia manome anao ny fiadanan-tsaina fa ny Magic Tilt dia manamboatra tranofiara mendrika ny fitokisanao sy ny fampiasam-bolanao. Làlan'ny sambo sy faritra
Magna-Bon International Distributor Simika sy Petrochemical Fungicides amin'ny fambolena Magna Bon International LLC no mpizara any ivelany ny vokatra Magna Bon (www.magnabon.com) ao anatin'izany ny vokatra malaza manerantany CS-2005. Ity vovo-dronono vita amin'ny varahina ao anaty vahaolana ambany ity dia voaporofo fa mpitarika indostrialy ary vahaolana amin'ny filan'ny mpamboly. Ny vokatra dia amidy sy hosedraina amin'ny fitsapana any Brezila, Espana, Gresy, Torkia ary Israel. Tongasoa eto amintsika ireo mpaninjara rehetra izay te-hitsapa sy hizaha ny vokatra. Hanampy amin'ny fanomezana santionany sy famolavolana ireo kaodim-pitsapana ny vokatra mba hiantohana ny fahombiazana. Fungicides biolojika ambany varahina - bakteria miady amin'ny bakteria - fanadiovana ny fitaovam-pambolena - solifara varahina
Mainstream Engineering Corporation / QwikProducts by Mainstream Manufacturer Simika sy Petrochemical Fitaovana sy kojakoja fitsaboana sy fiara fitateram-bahoaka Mainstream dia natsangana tamin'ny taona 1986 avy amin'ny Dr. Robert P. Scaringe. Mainstream dia vahaolana mifantoka amin'ny vahaolana, fikarohana, fampandrosoana ary famokarana orinasa kely any Rock95, FL. Ny mainstream dia nanomboka tamin'ny fifanarahana R&D roa avy amin'ny US Air Force. Izahay izao dia manamboatra fitaovana ary manao fikarohana momba ny R&D ho an'ny ankamaroan'ny masoivohon'ny governemanta amerikana sy ireo mpifaninana voalohany amin'ny governemanta. Ny vokatra Mainstream dia amidy eran'izao tontolo izao ary mitazona ny Index of Defense Commercialization XNUMX%. QwikProducts avy amin'ny Mainstream Engineering dia manamboatra vokatra avo lenta avo lenta ary manome fiofanana, fitiliana ary fanamarinana ho an'ny Indostria HVAC / R. Fanadiovan-drivotra / fanadiovan-tsakafo - Kitapo fanamboarana terminal - Kitapo fitsapana asidra - Tombo-dranomaso - Refrigerant sy fitsaboana menaka - Kitapo fanadiovana volo - Kitapo fikajiana - Kitapo fitsapana CO Detector - Kitapo fitsapana setroka setroka
Mamachas Trading Distributor Entana ny mpanjifa Vokatra fahasalamana sy hatsarana Manome marika marika fanatsarana tarehy sy matihanina malaza sy malaza eran-tany. Kosmetika - Fitaovana hatsaran-tarehy - Vokatra fikarakarana manokana
Mason Vitamins, Inc. Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra fahasalamana sy hatsarana Momba ny kalitaon'ny vitamina Mason azonao itokisana hatramin'ny 1967 Ny tantarantsika Nanomboka tamin'ny 1967 izany rehetra izany miaraka amin'ny vina hamokarana vokatra avo lenta ary hitazomana ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara indrindra. Nanomboka tamin'ny fivarotam-panafody eo an-toerana ny orinasanay, ary nanomboka tamin'izay dia nanitatra ny fisianay tsena izahay ary nahazo ny faneken'ny mpanjifa manerantany. Fantatray fa ny fahasalaman'ny ankohonanao no laharam-pahamehanao indrindra, noho izany, nandritra ny taona maro dia nanampy vitamina sy famenon-tsakafo 300 mahery izahay mba hifanaraka amin'ny filanao ara-pahasalamana sy hanohanana ny fomba fiainanao. Ny fanoloran-tenanay dia manolo-tena amin'ny vokatra sy ny fiadananao izahay. Ao anatin'ny iraka ataontsika dia miezaka izahay manome ny vokatra tsara indrindra hananana fomba fiaina mahasalama amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo akora faran'izay avo lenta izay mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny lalàna. Famenon-tsakafo - Vitamina - Zavamaniry - Gummy - Krim-bika fanatsarana - Menaka tena ilaina
McILPACK Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra fahasalamana sy hatsarana At Mcilpack faly izahay fa afaka manolotra serivisy isan-karazany ao an-trano, izay mamela anay ho fivarotana tokana ho anao amin'ny filàna rehetra mety hipoitra avy amin'ny tetikasa vokatra kosmetikao. Tsy misy tetikasa kely loatra na lehibe loatra ho antsika. Na mila vokatra miloko volo ianao, fikarakarana hoditra, na vokatra spa, afaka manampy anao izahay. Raha tsy manana «formule» ianao dia afaka manampy anao mamolavola iray. Raha manana formula ianao dia afaka manamboatra ny vokatra ho anao izahay, na manampy anao hanatsara ny formule anao aza. Tianay ny manampy anao hamorona ny vokatrao ary hamoaka izany eny an-tsena, miaraka amin'ny iray amin'ireo fotoana fihodinana haingana indrindra eo amin'ny sehatry ny asa. Mifandraisa aminay mba hahafahanay manomboka miasa amin'ny tetikasanao. Famokarana fifanarahana - Fikolokoloana volo - lokon'ny volo - fikolokoloana hoditra - vokatra fandroana
Meopta Manufacturer Photonics sy optika Optical miaramila sy aerospace Meopta dia orinasa iraisampirenena manana fomban-drazana maharitra sy manankarena amin'ny fampiroboroboana, ny famokarana ary ny fanangonana vokatra optika, opto-mekanika ary optoelektronika kilasy an'izao tontolo izao. MeoptaNy endriny manara-penitra, ny famokarana injeniera ary ny fahaizany mivory dia ahafahany manome vokatra sy serivisy avo lenta avo indrindra amin'ny tsenan'ny indostria, miaramila ary ny mpanjifa. Optical - Opto mekanika - Optoelektronika - Tetikasa nomerika sinema - Teknolojia Aerospace - Rafitra fitaovam-piadiana miaramila
Meryt Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra fanadiovana sy fanadiovana Meryt Corp dia manamboatra Sanitizers, mpamono otrikaretina, mpanadio sy degreasera be kalitao any Broward County Florida, Etazonia. Meryt Corp Industrial Products dia namboarina tamin'ny alàlan'ny haitao mandroso sy ara-tontolo iainana. Ny ekipa mpamorona simia sy injenierantsika mpamorona dia manana traikefa mitambatra mandritra ny 45 taona mamolavola simika manokana ho an'ireo indostria voafehy. Ireo mpanadio tànana voasoratra anarana an'ny FDA sy ireo otrikaretina EPA dia mahafeno ny fenitra faran'izay avo lenta amin'ny tsena. Meryt Ny misiona an'ny Corp dia namolavola vokatra maitso sy maharitra kokoa ho an'ny tontolo iainana mamorona vahaolana amin'ny indostria maro. Simika fanadiovana - Simika mamono otrikaretina - Saniteratera tanana
Miami Dade College anjerimanontolo Institution Educational Fianarana eran-tany, varotra & fitaterana Miami Dade College no andrim-panjakana isan-karazany indrindra amin'ny firenena. Ny oniversite valo any amin'ny oniversite, ivon-toerana fanentanana ary MDC Online dia manolotra làlan-kaleha maherin'ny 300, anisan'izany ny diplaoma mpiara-mianatra sy bakalorea, mari-pahaizana momba ny asa ary fiofanana. MDC dia mpandray mari-pankasitrahana nasionaly marobe ao anatin'izany ny Aspen Prize. Ny Kolejy dia mpitarika ara-toekarena, koltoraly ary olom-pirenena ho fampandrosoana ny vondrom-piarahamonintsika manerantany. Ny Alumni sy ny mpiasa dia mandray anjara maherin'ny 3 miliara dolara isan-taona amin'ny toekarena eo an-toerana, ary ireo nahazo diplaoma MDC dia mitana andraikitra ambony amin'ny asa lehibe rehetra. Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho ny mdc.edu. Ny MDC dia misolo tena ny FITE amin'ny sekoliny efatra: ny Sekolim-pianakaviana Miguel B.Fernandez momba ny asa aman-draharaha eran-tany, ny varotra sy ny fitaterana, ny ivontoerana fanabeazana sy ny teknolojia (BIT), ny fanabeazana mitohy sy ny fampandrosoana matihanina (SCEPD), ny injeniera sy ny teknolojia (EnTec ), MDC Online, Ny sekolin'ny siansa. Orinasa manerantany - Fianarana sy varotra & fitaterana - Fandaharam-pianarana any ivelany
Miami International University of Art & Design anjerimanontolo Institution Educational Siansa kanto Miami University University of Art and Design (MIU) dia oniversite mpamorona zavakanto amin'ny toerana voalohany ho an'ireo mpianatra liana amin'ny fianarana any Etazonia. Ny campus misy anay dia eo afovoan'ny Distrikan'ny kanto sy ny endrika any Miami. Ny programa momba ny diplaomanay dia voalamina amin'ny sehatry ny lamaody, filalaovana & haitao, sarimihetsika & famokarana, sarimiaina & effets, marketing, interior & industrial design, Visual Design and Culinary. Ny diplaomantsika rehetra dia manana fototra matanjaka amin'ny fandraharahana sy ny orinasa ary mifantoka amin'ny fifantohana manokana, toy ny Design Design and Merchandising, Visual Arts, Design an-tsary, Design an-trano, sary an-tsary, effets Visual, Production Production, Digital Filmmaking, Game Art & Design ary Bebe kokoa! Famolavolana virtoaly - Famolavolana anatiny - Animation sy effets - Film sy Production - Fashion
Miracle Fruit Oil Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra fahasalamana sy hatsarana Miracle Fruit Oil Ny orinasa dia manome vokatra ara-pahasalamana / fahasalamana sy hatsarana avo lenta izay voaporofo fa mahomby ary tohanan'ny siansa mivaingana misy Miracle Fruit Seed Oil®. Izahay no orinasa voalohany sy tokana manerantany manao vokatra misy Miracle Fruit Seed Oil®, menaka voa tsy fahita firy sy hafakely avy amin'ny loharano voajanahary sy mahasalama, ilay voankazo voa fahagagana. Ny patanty dia napetraka ary ny mari-pamantarana voasoratra anarana any Etazonia sy iraisam-pirenena. Miracle Fruit Seed Oil® Ny fitsaboana volo no vokatra voalohany sy tokana misy menaka volo misy Miracle Fruit Seed Oil®, voaporofo fa azo antoka sy mandaitra amin'ny fanamafisana ny volo, mampihena ny fahatapahana, mampihena ny fihenan'ny volo noho ny fahatapahana ary ny famerenana amin'ny laoniny ny volo tsy ho simba. . Menaka voa voa voankazo - Fitaovana hatsaran-tarehy - kosmetika - fitsaboana volo
Morganna's Alchemy Skin Care Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra fahasalamana sy hatsarana Ao amin'ny Alchemy an'i Morganna, manolo-tena izahay hamorona vokatra skincare izay mifanaraka amin'ny karazana hoditra rehetra. Morganna's Alchemy dia efa hatokana ho an'ny fitadiavana akora voajanahary kalitao manerantany ary ny fikarohana dia nanampy anay hamantatra ny sasany amin'ireo akora tsara indrindra atolotry ny natiora. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fizotran'ny sonianay Phyto-Dermo-Cosmeceuticals, ny hetsika mahery vaika dia tafiditra ao anaty synergy, mamoaka vokatra mahery haingana sy azo antoka. Notohanan'ny akora azo tsaboina sy voaporofo ara-pitsaboana, ny Alchemy an'i Morganna dia mahomby, maharitra ary skincare voajanahary azonao itokisana. COSMOS Eco-Certified. Vita amerikanina. Fampihenana ny ketrona - kosmetika - Antioxidant - diovina - Fikolokoloana maso - fikolokoloana volo - fikosoham-bolo sy sarontava - Fikolokoloana ny hoditra voajanahary
Motive Learning Service Provider Serivisy ara-bola sy matihanina Fiofanana mpiasa Ny orinasanao, ny fizotranao ary ny politikanao. Tsy misy mpikapa cookie momba izany. • Famolavolana torolàlana mifantoka amin'ny traikefan'ny mpampiasa manintona • Mpanadihady angona izay mamaritra ny fanarahan-dalàna ataon'ny orinasanao • Ireo matihanina amin'ny horonan-tsary mahay amin'ny sehatry ny fifandraisana At Motive Learning mino izahay fa ny tetikasa lehibe rehetra dia manomboka amin'ny fahitana sy paikady famoronana. Izahay dia mitarika anao amin'ny alàlan'ny fomba fanaonay mamorona mba hamolavola ny fahitana ho an'ny fampiofananao mba hahazoana antoka fa mifanaraka tsara amin'ny tanjonao sy ny tanjonao izany. Miara-mandinika tsara ny kolontsain'ny orinasanao sy ny dinamika ataon'ny mpianatra izahay hamaritana ny endrika eLearning mety, ny feony, ny haavon'ny fifampiraharahana, ny fampiasana vazivazy ary ireo toetra hafa manatsara ny fiainana ny fianarana. Fitantanana ny mari-pahaizana momba ny mpiasa - Fampiofanana ho an'ny mpiasa - Fanofanana momba ny asa - Fanombanana ny fahombiazan'ny mpiasa
MRE STAR Manufacturer Vokatra amin'ny sakafo Vonona ny hihinana sakafo MRE STAR Ny sakafo MRE, Vonona ny hihinana (MRE) dia fihinan-tena, sakafo voalanjalanja novokarina ho an'ny mari-pahaizana miaramila ho an'ny fiainana talantalana lava sy tsiro lehibe. Ny sakafo iray tokana feno dia misy kaloria eo amin'ny 1,100-1,300 ary misy entrée, starch, snack, tsindrin-tsakafo, fangaro zava-pisotro misy ranom-boankazo ary fonosana fampiasa miaraka amin'ireo zavatra ilaina rehetra, miampy kafe, vatomamy ary flakes mena. Vonona ny hihinana sakafo MRE ary raha ampidiro ny heater-jaza tsy misy pentina dia afaka manana sakafo mafana sy matsiro ary mahavelona ianao, na aiza na aiza ary na oviana na oviana. Sakafo ara-tafika sy sakafo maika
MRT Cloud Service Provider Teknolojian'ny fampahalalana fifandraisan-davitra Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'i Avaya, ny lozisialy AutoCrew Cloud dia manome fitohizan'ny asa aman-draharaha, fifandraisana azo itokisana ary manovaova ny indostria rehetra, ao anatin'izany ny fitsaboana, ny fanabeazana, ny orinasa orinasa ary ny federaly ary ny eo an-toerana. AutoCrew Cloud dia miantoka ny fikambanananao tsy ho tapaka mandritra ireo fotoana tsy ampoizina. Ny rafitray dia namboarina mba hanomezana fahafaham-po ireo filàna isan-karazany ilain'ny fikambanana mandritra ny areti-mifindra COVID 19, miantoka ny valiny ara-potoana, mandeha ary mahomby - manome ny fiarahamonina tombony azo antoka indrindra hijanonana ho azo antoka. Ireo vahaolana ireo dia tsy voafetra fa ao anatin'izany: Fanentanana momba ny fananganana olom-pirenena COVID mandeha ho azy miverina amin'ny asa famotorana Automated Contact Tracing (rafi-pitantanana sy ny fanjakana) Fahafahana vaksiny sy fanentanana fananganana fandaharam-potoana sy fampahatsiahivana Ho fanampin'ny COVID 19 vahaolana manokana amin'ny MRT ny fampandrenesana faobe, endrika IVR Auto ary Auto Attendants, Web Chat ary Hotlines no azo atao mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. AutoCrew Cloud (ACNS) - Teknolojia fifandraisana maika - Teknolojia fifandraisana voajanahary - Fitaovana famonjena an-dranomasina
Multicom Manufacturer Teknolojian'ny fampahalalana Fitaovana tambajotra broadband Vokatra Gen Fiber Optic manaraka - Multicom dia manambara ny andiany Fiber Optic Actives sy Passive ho avy miaraka amin'ny antsipiriany momba ny Multicom tranokala: www.multicominc.com. Multicom dia manambara ihany koa ny singlemode vaovao sy ny làlan'ny vokatra optika mifototra amin'ny fibre, anisan'izany ny vokatra fametrahana sy ny fampitaovana: Multicom mandeha ho azy Fusion Splicer, OTDR, sy maro hafa - misy izao. Ny taranaka ho avy, manan-karena endri-javatra, sarobidy Multicom ny tsipika vokatra optika vita amin'ny fibre dia misy koa 1310 sy 1550nm Optical Transmitters, standard and high power 1550nm EDFAs, Optical Receivers, standard and high power and accept-only Micro-Nodes, ary karazana Corning-fibre passive fibres, splitter, WDMs, patch sy splice enclosures ary Corning fibre optic tariby. Multicom mirehareha manome vahaolana farany, ho an'ny farany, GPON / FTTH / HFC / Wireless / IT / fibre optic ho an'ny tambajotram-peo-horonan-tsary - amin'ny vidiny tsy mampino. Fitaovana tambajotra broadband - Fiber Optic Cable - Hardware Pole Line - Encoder an-tsary sy Modulator - Sakafo amin'ny zanabolana - Fitaovana fitsapana optika fibre
Multi-Media Works Service Provider Serivisy ara-bola sy matihanina Video Production Multi-Media Works Orinasa fampitam-baovao marobe ahazoana loka, mamokatra horonan-tsary, fifandraisana amin'ny daholobe, fanoratana atiny ary media sosialy. Ny votoatintsika dia ny fanoratana sy famokarana horonantsary fitantarana tantara - horonantsary mini ho an'ny orinasa, sampandraharaham-panjakana, fikambanana tsy miankina. Inona no mampiavaka anao? Hitanay sy ampiharinay izany amin'ny horonantsary izay tsy hay hadinoina. Ho fanampin'izay, izahay dia mampiroborobo ireo horonantsary miaraka amin'ny marketing nomerika handroahana ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao. Amin'ny maha-jeneraly monina any South Florida, dia namokatra teo an-toerana, nasionaly ary manerantany izahay. Ny horonan-tsary dia fitaovana marketing matanjaka. Izy io dia mitaona sy mandresy lahatra ny vinavina hisafidy anao amin'ny fifaninanana. Ankehitriny dia aleon'ny olona mijery mihoatra ny mamaky — 83% amin'ny fifamoivoizana amin'ny Internet dia horonan-tsary. Famokarana horonantsary - PR - Fanoratana atiny
Natalie's Orchid Island Juice Company Manufacturer Vokatra amin'ny sakafo zava-pisotro Nandritra izay 30 taona lasa izay, dia natokana hanome sakafo ara-pahasalamana ho an'ny fianakaviana izahay. Ny famokarana ranom-boankazo vaovao sy madio dia asan'ny fitiavana ho an'ny fianakavianay. Rano voajanahary - ranom-boankazo - Famenon-tsakafo - vokatra detoxification
Natural Vitamins Laboratory Corp Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra fahasalamana sy hatsarana Manamboatra vitamina sy famenon-tsakafo amin'ny fatra sy endrika samihafa ho an'ny tompona marika Vitamina sy famenon-tsakafo - Famenon-tsakafo, Mineraly - Herbs - Manamboatra marika tsy miankina
New England Machinery Manufacturer Fitaovana sy kojakoja indostrialy Fitaovana fonosana Mpitarika iraisam-pirenena amin'ny fanavaozana sy ny haitao mandroso New England Machinery (NEM) dia manamboatra milina famonosina haingam-pandeha ho an'ny indostrian'ny sakafo, zava-pisotro, fanafody, fanafody, otomotif, simika ary fikarakarana manokana. Ny NEM dia miavaka amin'ny Unscramblers, Cappers, Orienters, Lidders, Cap Tighteners, Overcappers, Pump Sorters, Pump Placers, Scoop Feeders, Pluggers, Hopper Elevators, Spout Inserters ary maro hafa. Ho fanampin'ny tsipika feno vokatra avo lenta, ny NEM dia mamolavola sy manamboatra milina famonosana ho an'ny fampiharana manokana. New England Machinery manana traikefa 47 taona mahery sy milina an'arivony napetraka manerantany, na amin'ny orinasa Fortune 500 na koa orinasa fanombohana kely. Niorina tamin'ny 1974 avy amin'ireo injenieran'ny fonosana efa za-draharaha, ny NEM dia manohy manambola be amin'ny R&D mba hanomezana haitao ny haitao zavakanto ho an'ny mpanjifany marobe. Ny haitao mandroso ampiarahina amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ambony dia nahazo laza malaza amin'ny NEM. Fitaovana fonosana - Unscramblers - Cappers - Orienters - Retorquers - Placers paompy - Sidders - Scoop feeders
NonaMins Gummy Vitamins Distributor Entana ny mpanjifa Vokatra fahasalamana sy hatsarana Ny tsipika vitaminina NonaMins dia mampitombo ny tsimatimanota sy ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Drafitra ara-pitsaboana namboarina niaraka tamin'ny akora faran'izay avo lenta: * Nonamins Kids complete MultiVitamins dia manome tosika isan'andro ny hery fiarovan'ny zanakao miaraka amin'ny vitamina sy mineraly ilaina toy ny otrikaina A, C & D, Zinc ary Calcium. Fomba tsara hanatsarana ny sakafo mahavelona ho an'ny mpihinana mifantina. * Nonamins Vitamina D dia mety amin'ny fahasalaman'ny taolana, fisorohana ny homamiadana ary fahasalamana amin'ny ankapobeny. Manamaivana ny Fahakiviana, Faharerahana, fanaintainan'ny vatana ary fanaintainana. Mialà amin'ny bla! * Nonamins Iron with Multivitamins no fomba matsiro indrindra hampidirana ny vy ao aminao. Miaraka amin'ny B-complex, ireo vitamina ireo dia hanampy amin'ny fampitomboana ny haavon'ny angovo anao, hatory tsara kokoa ary hanala ny zavona ao an-tsaina, hanatsara ny fifantohanao ary hanampy hamelomana sy hamerenana amin'ny laoniny ny vatanao fivarotana vy simba. Vitamina - Fanampiny - Vokatra fahasalamana sy fahasalamana
NovoaGlobal, Inc. Manufacturer Fitaterana sy fitaovana Fotodrafitrasa sy fitaterana NovoaGlobal® dia mpamorona mpamorona sy mpamokatra vahaolana amin'ny fitantanana ny fifamoivoizana, vahaolana amin'ny fampiharana ary vahaolana amin'ny saina izay natao hanatsarana ny fiarovana ny fifamoivoizana, hampihena ny ratra amam-pahafatesana ary hahafaty ny mpiasa ary hanampiana ny mpitandro ny filaminana hampihena / hamaha ny asan-dahalo ao amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo. Ny fakan-tsarimihetsika jiro mena mavitrika an'ny NovoaGlobal sy ny vahaolana amin'ny fampiharana haingana dia mampiditra ireo haitao farany farany amin'ny fakan-tsary sy sary am-peo, fakana sary HD ary fanodinana sary, ary radara fanarahan-dia maro, hitonona vitsivitsy fotsiny. Miaraka amin'ny fampiharana ny hazavana mena sy haingam-pandeha, NovoaGlobal dia manampy ny tanàna hahatratra ny tanjon'ny Vision Zero sy Safe City. NovoaGlobal dia manolotra fahaiza-manao fampiharana fanampiny toy ny crosswalk, gridlock, stop sign, fijanonana, fiara be loatra, fiampitana lalamby, tapakila elektronika ary cam body. Ho fanampin'izay, ny rafitra NovoaGlobal's Plated Recognition Plate (ALPR) dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny vahaolana mena sy haingam-pandeha. Ny orinasan'ny fifamoivoizana dia tsy orinasantsika fotsiny; ny fitiavantsika. Miasa tsy an-kijanona izahay hanatsara ny fiarovana ny fifamoivoizana isan'andro. Fanamafisana ny fifamoivoizana mandeha ho azy (ATE), fiarovana ny besinimaro, làlana sSafety, fitantanana fifamoivoizana, fiarovana ny fifamoivoizana, fampiharana sary, fakan-tsarimihetsika fiarovana, fifamoivoizana mandeha ho azy, fampiharana lalàna, fakantsary jiro mena, fakan-tsarimihetsika haingam-pandeha
Olivia Oils & Supplements Distributor Entana ny mpanjifa Fitsinjarana ny vokatra antsinjarany Ny OLIVIA dia entin'ny fanoloran-tena. Izahay dia manolo-tena hanome vokatra manampy ny olona hanana fiainana salama sy mahasambatra kokoa. Nanomboka tamin'ny fahitana izany mba hamoronana portfolio miavaka mifantoka amin'ny foto-kevitra vaovao. Ny fahalalantsika sy ny zavatra niainantsika dia mamaritra ny fenitra avo lenta sy ny kalitao takiana amin'ny famoronana sokajy tsirairay.Raha manohy ny diany tsy misy farany mankany amin'ny fanatsarana ny fomba fiaina salama izahay, dia ho eo afovoan'ny OLIVIA hatrany ianao. Orinasa fitantanana fanondranana - vokatra ara-tsakafo - vokatra fikarakarana manokana - fizarana vokatra fivarotana lehibe - fizarana sakafo an-tsena - entam-barotra ho an'ny mpanjifa
Organic Farms Vitamins Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra fahasalamana sy hatsarana Organic Farms Vitamins manana tsipika kalitao avo lenta, vitamina voajanahary sy vokatra famenon-tsakafo voajanahary rehetra vita tany Etazonia, izay nitombo tao anatin'ny dimy amby roapolo taona lasa. Ny endri-javatra lehibe iray izay mampiavaka antsika amin'ny ankamaroan'ny marika famenon-tsakafo dia ny karazan-drafitra sarotra atolotray fa tsy ny akora mpamokatra tokana ihany. Ny paikadinay sarotra dia mikendry ny antony maro amin'ny toe-pahasalamana sasany amin'ny alàlan'ny fomba feno kokoa fa tsy mitaky vokatra maro hafa ho an'ny tombontsoa mitovy. Organic Farms Vitamins dia entina any amin'ireo mpivarotra fivarotam-panafody lehibe toa an'i Walgreens, sy ireo fivarotam-panafody tsy miankina sy fivarotana sakafo ara-pahasalamana maro hafa. Manana programa fivarotana mivantana mavitrika ihany koa izahay any Puerto Rico miaraka amina tahiry mpanjifa mihoatra ny 300,000. Izahay izao dia manitatra iraisam-pirenena hitondra ny kalitaonay sy ny vokatra voaporofo any amin'ny firenen-kafa. Tianay ny hiara-hiasa amin'ireo mpaninjara na mivantana amin'ireo mpivarotra izay te hanome vahaolana ho an'ny mpanjifa mahatsiaro tena ara-pahasalamana. Famenon-tsakafo - otrikaina - fanomanana fanafody
PABOT Service Provider Fitaovana sy kojakoja indostrialy Solontenan'ny mpanamboatra NY MPITARIKA AMIN'NY CONSULTING GLOBAL INDUSTRIAL Ny orinasanay dia miaraka amina matihanina manana fahaiza-manao amin'ny sehatra maro avy amin'ny kaontinanta maro. Vonona izahay hamaha ny olanao mifandraika amin'ny fanamboarana fitaovana diamondra, akora fikikisana, ary resina thermosetting. Manome akora, fitaovana famokarana, vokatra semi & vita ary serivisy fanoloran-kevitra amin'ny antoko fahatelo izahay. Ny traikefa ananantsika manerantany dia ahafahantsika mahatakatra ny kolontsaina samihafa ary manome antsika ny fahalalahana sy ny fahaizana miatrika indostria samihafa. Sourcing ara-materialy - Serivisy fanoloran-kevitra momba ny antoko fahatelo - Orinasa mpivarotra fanondranana - Fitaovana Diamond - Fitaovana indostrialy
Palladio Beauty Group Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra fahasalamana sy hatsarana Palladio Beauty Group dia orinasa amerikanina hatsaran-tarehy madio madio natsangan'ny veterans indostrialy tamin'ny taona 1999 ary manana foibe any South Florida. Izy io dia mifantoka amin'ny tsipika vokatra mandaitra Professional izay misy: Palladio Cosmetics Fantatra amin'ny tsara ho an'ny hoditra botika sy otrikaina ampidirina otrikaina. Palladio Cosmetics dia tsy misy paraben, tsy misy herisetra ary manolotra vokatra marobe momba ny legioma sy gluten. Probelle Orinasa mpikarakara fantsika sy tongotra matihanina manampahaizana manokana amin'ny fikarakarana ny hoho sy ny tongotra ary ny fikolokoloana anti-fungal . Eran-tany, ny vokatra Palladio dia amidy any amin'ny firenena 5,000 mahery. Cosmetika - kojakoja hatsaran-tarehy - Kitosim-borona - Fitaovana sy borosy - Cosmetika ampiarahana otrikaina
Palm Beach Atlantic University anjerimanontolo Institution Educational Fianarana ankapobeny Palm Beach Atlantic University dia mipetraka ao afovoan'ny iray amin'ireo toerana tsara indrindra sy malaza any Amerika, afovoan-tanànan'i West Palm Beach, Florida. Ho fanampin'ny hatsarana voajanahary amin'ny toerana misy anay eo amin'ny Intracoastal Waterway, PBA dia manolotra tombontsoa akademika sy matihanina tsy manam-paharoa. Manolotra fandaharam-pianarana sy majika maherin'ny 50 izahay ary mpianatra 17 eo ho eo ny salan'isa antonony. Ho olona sarobidy ianao izay ny tanjony, ny mahaliana azy, ny ilainy ary ny nofinofisiny dia tohanan'ny isan'andro mpampianatra sy lehilahy kristianina manolo-tena izay manam-pahaizana sy mpampianatra be laza. Ny fomba fijery an'izao tontolo izao Kristiana dia ampidirina amin'ny lafiny rehetra amin'ny traikefa PBA, manomboka any an-dakilasy ka hatramin'ny fiainan'ny mpianatra. Diplaom-pianarana nahazo diplaoma sy nahazo diplaoma - Fandaharam-pianarana any ivelany - Zavakanto - Olombelona - Siansa
Palm Beach Naturals Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra fahasalamana sy hatsarana Naorina in 2014, Palm Beach Naturals dia natokana hampiroboroboana safidy azo antoka, voajanahary ary mahomby amin'ny akora simika mahery setra sy matetika misy poizina fampiasa matetika amin'ny vokatra ara-pahasalamana sy hatsarana ankehitriny. Ny tsipika FOOT SENSE amin'ny vokatra fikarakarana tongotra voajanahary dia hita fa fomba mahomby indrindra amin'ny vokatra simika sy vokatra hafa tsy dia mandaitra izay atokisan'ny mpanjifa. Izahay dia mamokatra vokatra avo lenta indrindra amin'ny alàlan'ny akora voajanahary tsara indrindra nalaina avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Ny vokatray rehetra dia natao tany Etazonia ary notohanan'ny antoka miverina 100%. Raha tsorina dia hoe mpanova lalao ny tsipika FOOT SENSE! Vokatra voajanahary voajanahary - vokatra volombava - zava-pisotro proteinina - probiotika
Pegasus Medical.net Service Provider Siansa fiainana sy haitao fitsaboana Hospital Equipment Pegasus Medical Concepts Incorporated dia mpitarika manerantany amin'ny famoahana vahaolana fitahirizana fahombiazana ho an'ny Fikambanana fikarakarana ara-pahasalamana mitarika ankehitriny Ny lamin'ny vokatra marobe dia ahitana vahaolana amin'ny fitehirizana ara-pitsaboana sy lalimoara fitsaboana ary koa sarety fitaterana, famelomana ary fitaterana isan-karazany. Sarety - Kabine - Hisokatra misokatra - fitehirizana - fanaka
Perry Baromedical Manufacturer Siansa fiainana sy haitao fitsaboana Medical Equipment Perry Baromedical dia mpitondra an'izao tontolo izao amin'ny famolavolana sy ny famokarana ny rafi-pitsaboana oxygen hyperbaric (HBOT). Tombony azo avy amin'ny traikefa 60 taona mahery tamin'ny injeniera sy ny famokarana sambo fanerena. Perry dia nametraka rafitra mihoatra ny 1,500 amin'ny tobim-pahasalamana manerana ny firenena 40+, miaraka amin'ny fitsaboana maherin'ny 4.5 tapitrisa vita soa aman-tsara. Ny efitrano Hyperbaric dia fitaovana fitsaboana US Class Class II ampiasaina amin'ny fitsaboana ireo marika efatra ambin'ny folo (14) US FDA nekena. Anisan'ireny ny ratra mitohy ao anatin'izany ny DFU, ny ratra aorian'ny taratra, ary ny felaka sy ny grefy naratra. Perry dia manisa ireo mpanjifany ireo gadona serivisy fitsaboana any ivelany indrindra any Etazonia, Etazonia NAVY sy AIR FORCE, ary koa hopitaly fanamarihana any Etazonia, Japan, Taiwan, Canada, UK, Spain, Australia, ary amin'ny toeran-kafa. Perry dia mamokatra maodely efitrano fandraisam-bahiny HBOT lehibe indrindra sy ahazoana aina indrindra eto an-tany, anisan'izany ny vokatra marika misy marika Sigma sy BARA-MED. Efitra fitsaboana oksizenina hyperbaric
Pole Star Service Provider Aviation sy Aerospace Teknolojia fanarahana GPS At Pole Star manangana teknolojia mpisava lalana izahay, mitazona anao ho lohalaharana amin'ny fahitana an-dranomasina ary manome hery ny fanapahan-kevitrao manerantany. Faly izahay miara-miasa amin'ireo governemanta sy orinasa manerana ny faritry ny famatsiana. Miara-mandray anjara mavitrika amin'ny famoronana tontolo mangarahara, azo antoka ary mifanaraka amin'ny fiaraha-miasa izahay. Ny vahaolana isan-karazany ataonay dia natao manokana hanodinana ireo angona sarotra ho fahatakarana azo ekena amin'ny fanajana ny lalàna mifehy, ny fanasaziana ny sazy, ny fanarahan-dalàna, ny fanaraha-maso, ny fanaraha-maso ary ny fiarovana ny sambo. Fanaraha-maso an-dranomasina - fitantanana trangan-javatra - Sampan-draharahan'ny angon-drakitra ara-jeografia nohatsaraina - Fanarahan-dia an-dranomasina ara-barotra - Fifanarahana LRIT - Fampahafantarana ny faritra an-dranomasina
Port Canaveral Service Provider Fotodrafitrasa sy fitaterana Port Authority Port Canaveral vavahady kilasy eran'izao tontolo izao ho an'ny fitsangantsanganana an-tsambo, entana, fialamboly ary logistics, ary koa vavahadin-tsisin'ny sisintany vaovao. Port Canaveral Manana andraikitra sy andraikitra lehibe amin'ny fananganana sy fanohanana toekarena matanjaka ao amin'ny Florida Coast Space sy ny faritra Florida Afovoany - izao ny tsena mpanjifa faha-10 lehibe indrindra any Etazonia, miaraka amin'ny fitomboan'ny harinkarena mihoatra ny salan'isa nasionaly. Miaraka amin'ny portfolio isan-karazany sy ny filan'ny asa fivelomana eo amin'ny faritra, ny seranan-tsambo dia mampiasa vola amin'ny fampitomboana ny fahafaha-manao amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny seranan-tsambo sy ny sisin-tany, toy ny fananganana sy ny fanavaozana ireo dobo anaty rano maro karazana mba hifanaraka amin'ny fitakiana sy hampiroboroboana ny harinkarena ara-toekarena ho an'ny faritra. Ny faritry ny varotra raharaham-bahiny ao amin'ny Port No.136 dia manome foibe fitaterana quadrimodal tsy manam-paharoa, mampifandray ny ranomasina, ny tany, ny rivotra ary ny habaka miaraka amin'ireo tombontsoa izay misy ny fidirana amin'ny làlambe mora, ny volom-piaramanidina tsy misy fetra, ny fidiran'ny ranomasina lalina 43 metatra ary ny zava-maniry tsy araraotina. Fandefasana an-dranomasina - Fandraisana an-tanana ny karatra - Fivarotana fiara - fizarana-Terminal amin'ny sambo mpiaramiasa
Port Everglades Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Fotodrafitrasa sy fitaterana Port Authority Ivotoerana iraisam-pirenena ho an'ny varotra iraisam-pirenena, Port Everglades mazàna mitantana TEU mihoatra ny iray tapitrisa isan-taona ary manompo amin'ny vavahady mankany Amerika Latina, Karaiba ary Eropa. Any amin'ny tanànan'ny Florida ao Fort Lauderdale, Hollywood, ary Dania Beach, Port Everglades eo afovoan'ny iray amin'ireo faritra mpanjifa lehibe indrindra manerantany, ao anatin'izany ny onjan'ny mpitsidika hatrany amin'ny 112 tapitrisa manerana ny fanjakana sy ny mponina 6 tapitrisa ao anatin'ny vodin-tany 80-kilometatra. Port Everglades manana fidirana mivantana amin'ny rafitry ny làlambe interstate sy ny famindrana kaontenera intermodaly 43 metre an'ny Railway East Coast Railway, ary manakaiky ny Làlan'ny fandefasana Atlantika noho ny seranana atsimo atsinanan'i Etazonia. Ny fanatsarana sy ny fanitarana kapital mitohy mitentina $ 3 miliara ao anatin'ny 10 taona ho avy dia miantoka izany Port Everglades manohy mitantana ny fitomboan'ny fifamoivoizana ao anaty kaontenera. Fandefasana an-dranomasina - fikirakirana karatra - fivarotana fiara - fizarana
Port Tampa Bay Service Provider Fotodrafitrasa sy fitaterana Port Authority Port Tampa Bay nipoitra ho toy ny vahaolana vaovao any Florida ho an'ny entam-bokatra, manitatra ny andraikiny ho vavahady voalohany an'ny fanjakana ho an'ny entana betsaka sy hamaky. Ny fampidirana ny serivisy fitaterana Azia mivantana sy ny fifandraisana vaovao any Mexico dia nanatsara ny asanay amin'ny fanompoana ny tsena lehibe indrindra sy mitombo haingana indrindra ao amin'ny fanjakana - ny Tampa Bay / Orlando I-4 Corridor, Hub's Distribution Florida. Ity faritra Florida Afovoany ity koa dia iray amin'ireo tsenan'ny indostrialy mafana indrindra eto amin'ny firenena & foiben'i Florida ho an'ny fizarana, lozisialy ary famokarana. Trano manakaiky ny antsasaky ny mponina ao Florida izay misy mponina 21 tapitrisa, ary mandray ny ankamaroan'ny mpizahatany 126 tapitrisa isan-taona, ny I-4 Corridor no manana DC DC betsaka indrindra ao amin'ny fanjakana. Toy ny varavarana fidirana mankany I-4, Port Tampa Bay Tsara toerana hanompoana ny fitomboan'ny faritra, mitombo ny fangatahana fivarotana, ecommerce, sakafo & zava-pisotro, vokatra angovo, & fitaovam-panorenana sy fananganana. Fandefasana an-dranomasina - Fandraisana an-tanana ny karatra - Fivarotana fiara - fizarana-Terminal amin'ny sambo mpiaramiasa
PortMiami governemanta Fotodrafitrasa sy fitaterana Port Authority PortMiami nifindra TEU 1,066,738 45, izay mitentina XNUMX tapitrisa dolara mahery ny sandan'ny entana. PortMiami dia sambatra mamindra entana avy amin'ny faritra lehibe telo eto amin'izao tontolo izao, miaraka amin'ny 46% amin'ny entanay avy any Amerika Latina sy Karaiba, 33% avy any Azia, 20% avy any Eropa, tena vavahady manerantany. Manantena ny firoboroboan'ny entana izahay amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo seranan-tsambon'i Florida namanay. Fandefasana an-dranomasina - Fandraisana an-tanana ny karatra - Fivarotana fiara - fizarana-Terminal amin'ny sambo mpiaramiasa
Power-Pole Products Manufacturer Vokatra sy haitao an-dranomasina Vatofantsika sy kojakoja an-dranomasina JL Marine (Power-Pole Products), mpanavao ny Vatofanin'ny rano ambanin'ny tany Power-Pole tany am-boalohany, manolotra kojakoja an-dranomasina marobe izay novolavolaina mba hanomezana ny Total Boat Control, ao anatin'izany ny vatofantsika vatofantsika Blade Series, ny mpamily Micro Spike, ny CHARGE Marine Power Management Station (Amerika Avaratra) ihany) ary maro hafa. Vatofantsika rano marivo - Vatofantsika - Elektronika an-dranomasina - Motors de trolling - Motors marin-dranomasina
PPP Traffic Safety Innovations Manufacturer Fotodrafitrasa sy fitaterana Fiarovana amin'ny mpandeha an-tongotra sy ny mpamily Izahay dia mazoto mitondra zava-baovao momba ny fiarovana ny làlambe izay mitahiry sy miaro ny fiainana mba handrosoan'ny fikambanana misahana eritreritra eran'izao tontolo izao, izay mitady vahaolana ara-toekarena izay azo ampiharina mora foana hihaonana amin'ny fitakiana làlana mivoatra sy hanafoanana ireo maty. Vokatra fanamarihana eny amin'ny arabe - Fanatsarana ny fifamoivoizana - vokatra azo antoka momba ny fifamoivoizana - vokatra azo antoka momba ny mpandeha an-tongotra - Mpisaraka amin'ny lalana - vokatra azo antoka momba ny bisikileta - Retroreflectometers - vokatra azo antoka momba ny fiaramanidina
Prism Lighting Services Manufacturer Afo sy fiarovana Outdoor Lighting Mpanamboatra rafitra Prism Inflatable Lighting misy patanty. Jiro amin'ny tondra-drano - fiomanana amin'ny vonjy taitra - Fitaovana amin'ny loza voajanahary - Fikarohana sy famonjena, jiro maika - jiro indostrialy eny ivelany
Products On The Go Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra fahasalamana sy hatsarana Products On The Go mamolavola sy mivarotra vokatra fikarakarana zazakely, voajanahary, azo antoka ary sariaka ara-tontolo iainana sy tontolo iainana izay US sy patanty iraisam-pirenena miandry, voamarina fa voajanahary NPA, ary neken'ny dokotera. Ny vahaolana sonia mety ataontsika mifototra amin'ireo andiany mandeha dia mety tsara amin'ny fomba fiainan'ireo mpankafy ivelany, mpivahiny faran'ny herinandro, ary ho an'ny ray aman-dreny. Manolotra ny mpanjifa rafitra iray feno an'ny vokatra voajanahary maro karazana miasa eo ambanin'ny marika roa izahay. Ny rantsan-tongony kely sy ny tara-masoandro dia eny an-dalana. Ny rantsan-tongony kely dia misy kojakoja fanaovana lamba famaohana zazakely ary Sunshine On The Go dia ahitana vokatra fikarakarana masoandro voajanahary, ao anatin'izany ny sunscreens azo antoka amin'ny haran-dranomasina, ary koa ny moisturizer ary ny balsam-molotra. Ireo vokatra rehetra ireo dia azo vidiana amin'ny haben'ny fantsom-pitetezana, fanolorana lehibe tsy manam-paharoa, ary fanangonana manokana natao ho azy ireo. Rash Cream - Sunscreen - Mamiratra
QCS Service Provider Vokatra amin'ny sakafo Fanarahan-dalàna amin'ny fiarovana ny sakafo Miaraka amin'ny fisian'izao tontolo izao tsy mitsaha-mitombo, QCS dia manolo-tena hanampy ny tantsaha manerana an'izao tontolo izao hifandray sy hanolo-tena amin'ny fomba fambolena faran'izay tsara. Na mahazo mari-pankasitrahana aminay ianao na 12 dia manana fanontaniana fotsiny ianao dia afaka manome toky zavatra iray ianao: Na aiza na aiza misy anao dia eo izahay ary vonona hanampy. Ny lalàna momba ny fanavaozana ny fiarovana ny sakafo - ny fiarovana ny sakafo - ny fanamarinana voajanahary - ny fomba fambolena tsara (GAP) - ny mpanolo-tsaina amin'ny famokarana sakafo
Ramtech Overseas, Inc. Manufacturer Fitaovana sy kojakoja indostrialy Resina plastika Niorina tamin'ny 1987 tany Tampa, Florida, Etazonia, Ramtech Overseas, Inc. dia mpanondrana varotra simenitra solvent sy resins sentetika avy amin'ny mpamokatra petrochemical amerikana sy iraisam-pirenena ho an'ny mpanjifa any Torkia, Moyen Orient, Afrika, Azia ary Amerika Latina. Ny elanelam-bokatra misy anay dia misy koa ny rafi-panesorana betonika avo lenta ho an'ny indostrialy simenitra readymix. Resina plastika synthetic - PVC - PE - PP - EVA - Lemy PVC
Research Park ao amin'ny FAU anjerimanontolo Institution Educational fanabeazana Global Ventures at FAU Manampy ireo orinasan-teknolojia vao misondrotra mivelatra avy amin'ny tsenan'izy ireo mankany South Florida, ilay metro faha-7 lehibe indrindra any Etazonia amin'ny alàlan'ny fizarana ny tamba-jotra misy ireo matihanina amin'ny asa aman-draharaha any South Florida ary ny fikarohana stratejika ho an'ireo orinasan'izy ireo hitombo raha mamatsy rohy matanjaka amin'ny tsenan'i South Florida. Global Ventures dia manafaingana ny fitomboanao amin'ny alàlan'ny traikefa niainantsika 20+ taona: ao anatin'ny Florida Atlantic University Ny vondrom-piarahamonina (FAU) dia mampifandray anao amin'ny loharanom-pikarohana FAU izahay, manokana momba ny fahasalamana, siansa fiainana, sensor ary tambajotra ary koa ny siansa momba ny ranomasina sy ny tontolo iainana. Mpianatra 30,000+ an'ny FAU dia mazoto ary vonona hiara-hiasa aminao amin'ny maha-mpampiofana anao na mpiasa manampy ny ekipanao rehefa mihalehibe ny tobin'ny mpanjifa amerikana. Ny serivisinay dia misy loharanom-pahalalana fidirana an-tsena, fampidirana ny tambajotran'ireo mpamatsy sy mpivarotra antsika, fidirana amin'ny renivola fampiasam-bola ary koa ny kolontsaina sy ny fanofanana hafa. Fikarohana mifototra amin'ny akademika - Fandraharahana - Incubator orinasa - Teknolojia sy fanavaozana
RGF Environmental Group, Inc. Manufacturer Vokatra amin'ny sakafo Fitaovana fiarovana ny sakafo RGF dia manamboatra vokatra tontolo iainana mihoatra ny 500 ary manana tantaram-piainana 35+ taona manome an'izao tontolo izao ny rivotra, rano ary sakafo azo antoka indrindra nefa tsy mampiasa akora simika. RGF dia orinasam-pikarohana sy fanavaozana voamarina ISO 9001: 2015, mitazona patanty maro ho an'ny rafitra fitsaboana rano maloto, fitaovana fanadiovan-drivotra ary rafitra fanadiovana sakafo. Any afovoan'ny Port of Palm Beach Enterprise Zone, ny foiben-toeran'ny RGF dia mirefy 9 hektara, miaraka amin'ny fanamboarana, trano fanatobiana entana ary birao birao 130,000 metatra toradroa. Vao haingana ny RGF dia nanatsara ny toerana misy azy ireo, namorona fomba fiasa avo lenta amin'ny famokarana, ary mamela ny orinasa hanome vokatra avo lenta sy maotera tsara indrindra eo amin'ny tsena. Fitsaboana rano amin'ny indostrialy - Fitaovana fiarovana ny sakafo tsy mikraoba tsy mikraoba, vokatra avo lenta ho an'ny rivotra anaty trano - Rafitra fanadiovan-drivotra - Fitsaboana rano maloto - Fanodinana rano - fanadiovana ara-tsakafo
Richard's Paint Mfg. Inc. Manufacturer Fitaovana sy kojakoja indostrialy Doko sy palitao Nandritra ny 60 taona mahery, iraka nampanaovinay ny mpanjifantsika ny fikarakarana sy ny asa-tanana izay natolotry ny orinasa tantanin'ny fianakaviana - ny fianakavian'i Richard. Tamin'ny 1954 Ed Richard, Sr., mpifanaraka amin'ny hosodoko tamin'izany fotoana izany dia nanangana ny lokony voalohany. Nanolotra ity vokatra vaovao ity ho an'ny mpanao hosodoko hafa izy, niara-nandeha sy niresaka tamin'izy ireo izy rehefa fantany izay tena tadiavin'izy ireo tamin'ny palitao nampiasain'izy ireo. Nanomboka toy izany ny dia sy lova navelan'i Richard's Paint Manufacturing. Miaraka amin'ny birao, orinasa mpamokatra entana ary trano fanatobiana entana ao Rocknow, FL, ny Space Coast no tranonay. Izahay dia nitombo hatrany am-piandohana ambany ka hatramin'ny nanompoana ny mpanjifa amin'ny tsenan'ny trano, andrim-panjakana, varotra ary indostrialy miaraka amina vokatra an-jatony ho an'ny sehatra rehetra mila haingo sy arovana. Hoso-doko - tasy - Varnishes - Caulking - Sealers Concrete
Saint Leo University anjerimanontolo Institution Educational International Studies Naorina in 1889, Saint Leo University dia oniversite tsy miankina ambony naoty ao Florida. Saint Leo dia fonenan'ny mpianatra iraisam-pirenena mihoatra ny 600 avy amin'ny firenena 100 mahery. Manolotra traikefa an-tsekoly tsara ho an'ny mpianatsika izahay - avy amin'ireo akademia avo lenta miaraka amina programa 50 mahery ary manana diplaoma 3 + 1 hafainganam-pandeha miaraka amina mpianatra sy tahan'ny mpampianatra 14: 1 ka hatramin'ny fanolorantenanay ny soatoavina fototra Benedictine. Izahay dia manana politikam-pitsapana safidy tsy mitaky ny mpangataka bakalorea handefa ny naoty SAT, ACT na GRE, GMAT mandritra ny fizotry ny fidirana. Saint Leo dia manolotra vatsim-pianarana akademika ho an'ny mpianatra ambaratonga voalohany, hanampy amin'ny fanabeazana tsy miankina amerikana ho takatry sy azo idiran'ny mpianatra manerantany. Fianarana iraisam-pirenena - Fandaharam-pianarana any ivelany
Santa Fe College anjerimanontolo Institution Educational Fianarana ankapobeny Santa Fe College dia natsangan'ny governemanta fanjakana tamin'ny taona 1965 mba hanolotra fidirana malalaka amin'ny fampianarana ambony avo lenta. Nanomboka tamin'izay, ny oniversite dia nametraka programa sy serivisy izay manatanteraka ny iraky ny fahafaha-manabe fanabeazana, ny fandraisana andraikitra amin'ny fiarahamonina, ny fampandrosoana ara-toekarena ary ny fanavaozana ho tombontsoam-bahoaka. Ny filozofia tao amin'ny oniversite dia, ary mitohy ho, mifantoka amin'ny mpianatra. Santa Fe College dia fonenan'ny planeta, zoo fampianarana fantatry ny firenena, laboratoara an-tany (zohy ambanin'ny tany) ary efitrano fanaovana kanto manara-penitra, ary mamokatra ny Spring Arts Festival, hetsika ara-kolontsaina sy zavakanto lehibe indrindra any Alachua County, FL . Santa Fe CollegeNy International Student Services (ISS) dia natokana hanomezana mpianatra ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena sy ny fianakaviany ny fidirana sy ny fitaritana torolàlana ary koa ny fanohanana ireo mpianatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny torohevitra momba ny fifindra-monina ary ny fanohanana ny fisoratana anarana. Fianarana ankapobeny amin'ny oniversite - Fandaharam-pianarana any ivelany
SCALA Global Accelerator Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Fikambanan'ny fampandrosoana toekarena Fampiasam-bola mivantana avy any ivelany Ekipa manana traikefa amin'ny fiteny maro izahay, misy mpitarika, mpandraharaha, ary insider mahomby amin'ny fiaraha-miasa mba hanomezana consultation sy serivisy teknika an'izao tontolo izao ho an'ireo orinasa, olon-tsotra na mpampiasa vola te-hamorona paikady hitantanana orinasa any Etazonia. Fampanarahana mivantana amin'ny fampiasam-bola avy any ivelany
Sea Hawk Paints Manufacturer Vokatra sy haitao an-dranomasina Palitao sy loko hosodoko Ny mpivarotra firakotra an-dranomasina, New Nautical Coatings, Inc. ary ny marika Sea Hawk dia natsangana tamin'ny 1978 ary natokana hitondra ireo vokatra avo lenta sy avo lenta ary ny fahafaham-pon'ny mpanjifa ho an'ny tantsambo ankehitriny. Izy io dia manome vokatra marobe momba ny vokatra fanamainana an-dranomasina manokana izay misy loko antifouling ambany, volon-drano sy fanisy tombo-kase, fonosana famotsorana maloto, palitao gel, epoxy, solvents, varnish ary resins. Manolotra vokatra vaovao manerantany izy izao, ny Sea Hawk dia mitombo hatrany satria lasa be mpitady ny vokatra manerantany. Hoso-doko - Epoxies- Primers - Hull Cleaners - Palitao an-dranomasina fanoherana fouling
Sentry View Systems Manufacturer Teknolojian'ny fampahalalana Fiarovana sy fiarovana Sentry View Systems (SVS) dia manana foibe any Melbourne, Florida misy toerana fanampiny any Montana, North Dakota, Utah, ary Wyoming. Any afovoan'i Florida's Space Coast, orinasa mpamokatra injeniera vaovao i SVS. Manokana izahay amin'ny famoronana vahaolana mety amin'ny fitakiana tontolo iainana lavitra sy masiaka. Mifanaraka amin'ny filàn'ny mpampitambatra rafitra izahay amin'ny alàlan'ny fanomezana vahaolana mifototra amin'ny, fanaraha-maso, Remote Video Analytics (RVA) sy fitehirizana, vahaolana herinaratra lavitra, fikirakirana rindrambaiko natsangana, fitantanana fitaovana manan-tsaina ho an'ny fahavononan'ny rafitra tsara indrindra ary ny famahana olana maika. Ny SVS dia faly mampiditra ny Urban Mobile Detection Platform (UMDP) sy ny Fixed Platform. Ny sehatray dia manetsika fonosana sensor mba hamantatra, hamantatra, hanarahana ary hanomezana fepetra arahana amin'ny Unmanned Aerial Systems (UAS). Ireo sehatra roa ireo dia ampiasain'ny rindrambaiko SVS Nexus C2 ary manome vahaolana mahomby sy feno ho an'ny mpampiasa farany. Rafitra fitadiavana CBRN - Fanombanana lavitra amin'ny maso - Fiarovana amin'ny fotodrafitrasa - Fiarovana ny fananana lafo vidy - Fanaraha-maso ny sisin-tany - Fiambenana manodidina ny faritra - Video Analytics
SimBlocks.io Service Provider Teknolojian'ny fampahalalana Software Development SimBlocks.io dia orinasa kely manokan-tena amin'ny fampiasana maotera lalao 3D tena izy ho an'ny maodely, fanahafana ary fampiofanana amin'ny alàlan'ny fanohanana ny fenitry ny indostria ho an'ny tany geospatial, maodely 3D, ary ny fifandraisan'ny fifandraisana. https://www.youtube.com/simblocksio/video Sarintany Geospatial - Sarintany an-tanety - Teknolojia 3D - Teknolojian'ny motera lalao - Fanehoana an-tsary ny tany manontolo - Middleware simulation
SIMETRI, Inc. Manufacturer Siansa fiainana sy haitao fitsaboana Simulation Training Training Naorina in 2009, SIMETRI, Inc. manana mpiasa 32 manome haitao fanahafana, fanahafana ary fiofanana; fanofanana ara-pitsaboana sy fanampiana fanampiana; fahaizana momba ny lohahevitra ara-pitsaboana; simia mpandinika sy computational; ary talenta fikarohana, injeniera, teknika ary logistics ho fanohanana ny asa sy ny fampianarana. SIMETRI, Inc. dia orinasa kely sy vitsy an'isa manana orinasa kely manome zava-baovao sy serivisy manankarena izay manararaotra ny famoronana sy ny haitao tsy misy fetra hanatsarana ny traikefan'olombelona. Hatramin'ny nanombohany, dia nidika izany ny fikarohana, ny fampivelarana ary ny fanomezana vokatra sy serivisy mandroso, indrindra amin'ny sehatry ny simulation ara-pahasalamana, fa ao koa ny fampidirana injenieran'ny tambajotra sy ny lozisialy, ny siansa fitaovana, ny fikarohana momba ny tontolo iainana ary ny fiofanana. Fiofanana ara-pitsaboana - Simulator Anatomy ho an'ny olombelona - Simulator fanofanana ho mpitsabo
Slice Engineering Manufacturer Teknolojian'ny fampahalalana Teknolojia fanontana 3D Slice Engineering mamolavola, manamboatra ary mivarotra singa ho an'ny mpanonta 3D. Miara-miasa amin'ny mpanjifa sy orinasa mampiasa fanontana 3D, fanamboarana aditif) izahay, ary koa mpanamboatra mpanonta 3D. Raha efa mampiasa ny fanontana 3D ianao ho anisan'ny asanao na te hianatra bebe kokoa momba ny fomba hanaovana izany dia afaka manampy izahay (na farafaharatsiny hanondro anao amin'ny lalana tsara)! Ny tanjontsika isan'andro sy ny tanjontsika dia ny hanova ny hevitra ho lasa zava-misy. Izany dia ataontsika amin'ny alàlan'ny fampiasana ny famokarana fanampiny mba hahitana vahaolana tokana ho an'ny mpanjifanay. Fanontana 3D - Fitaovana fanontana 3D - Teknolojia fanontana 3D - Teknolojia fanontana 3D
Southeastern Aerospace Services, LLC. Service Provider Aviation sy Aerospace Fanamboarana sy fanamboarana fikarakarana fiaramanidina Serivisy Aerospace atsimo atsinanana LLC., dia veteran tsy manan-draharaha sy manana mari-pahaizana FAA vitsy an'isa ary toeram-panamboarana EASA. Manome fikojakojana / fanamboarana / fanarenana ny rafitra famokarana herinaratra fiaramanidina sy ara-barotra izahay mba hampidirina ao: APU Generators, DC Starter Generators, Air / Oil-Cooled Generators, Constant Speed ​​Drives, ary Integrated Drive Generators. Manana mihoatra ny 150 taona ny fahaizana teknika mitambatra OEM amin'ny rafitra mpamokatra herinaratra. Ny teknisiana anay dia samy manana fiofanana sy traikefa 10-25 taona tamin'ny alàlan'ny tantaram-piainana talohan'i Hamilton Sundstrand / UTAS. Na eo aza ny fanomezana ny rafitra fanamboarana sy ny fanamboarana ny rafitra fiaramanidina, ny SAS dia manolotra fifanakalozana, fanohanana ara-logistika, varotra entana, fahaiza-mitahiry ary vahaolana amin'ny fitantanana fanamboarana. Manana fahalalana isan-karazany mifandraika amin'ny kojakoja fiaramanidina hafa koa izahay mba hampidirana pneumatic, hydraulic, système fuel ary singa hafa novokarin'i Hamilton Sundstrand / UTAS. Toeram-panamboarana FAA - Fitaovana mpamokatra herinaratra fiaramanidina - Rafitra fitaterana fiaramanidina - Fiaramanidina fitaterana fiaramanidina
Space Florida governemanta Aviation sy Aerospace Aerospace sy fampandrosoana Spaceport Space Florida dia noforonina hanamafisana ny toeran'ny Florida amin'ny maha-mpitarika manerantany ny fikarohana, fampiasam-bola, fikarohana ary varotra. Amin'ny maha-fahefana fampandrosoana ny aerospace sy ny seranam-piaramanidina Florida anay, dia manolo-tena hisarika sy hanitatra ny asa ho an'ny indostrian'ny habakabaka izahay. Miaraka amin'ny mpiasa voavolavola be dia be, fotodrafitrasa voaporofo ary zava-bita tsy manam-paharoa fahombiazana, Florida no toerana mety indrindra hiroboroboan'ny orinasa aerospace - ary Space Florida no mpiara-miasa tonga lafatra manampy azy ireo hahomby. www.spaceflorida.gov Fikarohana Aerospace - Fampivoarana ny habaka - Space - Fandrosoana ara-toekarena
Specialty Products of America Manufacturer Fitaovana sy kojakoja indostrialy Additives simika Mpitondra indostria amin'ny Simia manokana mandritra ny 15 taona any Etazonia, Specialty Products of America manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana simika fitsaboana rano sy simika siramamy. Orinasa mpianakavy faharoa natomboka tamin'ny taona 1978, ny Special Products dia nametraka ny fifantohana amin'ny vahaolana vaovao sy maharitra ho an'ireo orinasa mpamokatra siramamy sy ireo orinasa be rano. Ny simika ataontsika dia manampy amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny dingana, ny vokatra ary ny kalitaon'ny vokatra. Izahay dia mivarotra Antiscalants, Scale Remover, Biocides, Cooling & Boiler Water Products, RO Antiscalants, Inhibitors de corosion ary maro hafa. Ny haitao misy ny tsena an'ny SP dia misy EVEREST ™, BIORID ™, BIOSPER ™, THERMAPRO ™, TORPEDO ™, RO PRO ™, SWEETOL ™ & RAPISOL ™. Miaraka amin'ny traikefa hahavitan'ny asa tsara, afaka manampy amin'ny fikarohana vahaolana tonga lafatra amin'ny filanao izahay. Simika manokana - Simika fanadiovana indostrialy - Surfactants manokana - Simika fitsaboana rano
SpecOps Group Inc. Manufacturer Afo sy fiarovana Rescue Equipment Ny ekipa specops dia ekipa mitodika amin'ny vahaolana manerantany. Izahay dia mamolavola, manamboatra ary mandefa ny teknolojia mpamonjy aina ho an'ny Miaramila sy ireo mpandray andraikitra voalohany manerantany. Orinasa veteranina sembana manana sy miasa izahay. Ny mpiasanay dia misy ny veterana miaramila, ny mpandray andraikitra voalohany ary ny injeniera. Ny fivoaranay rehetra, ny fanangonana ary ny famokarana dia atao any Florida hatramin'ny birao farany. Ny fanambarana nataontsika dia ny "Arovy ireo miaro antsika." Fitaovana fikarohana sy famonjena: fitaovan'ny fanaraha-maso - fitaovan'ny fampiharana lalàna - fitaovam-piasan'ny miaramila
Stimpson Manufacturer Fitaovana sy kojakoja indostrialy Fitaovana vy / fasteners Stimpson, natsangana tamin'ny taona 1852, no mpanamboatra sy mpamatsy grommets & mpanasa lamba, eyelet, setroka, fonosana, ary masinina mifamatotra. Amin'ny maha ISO: 9001: 2015 orinasa voamarina, Stimpson manome serivisy ho an'ny mpanjifa manam-pahaizana, miaraka amina vahaolana fanamafisana kilasy feno tanteraka eo ambanin'ny tafo iray. Ny halalin'ny sakany sy ny haben'ny zava-bitanay dia mamela ny mpanjifanay hitovo tokana ny fasteners azy ireo, sady mitahiry vola na fotoana na vola. Ny mpanjifa dia miankina amin'ny tahan'ny kileman-tariby eo amin'ny zero sy ny indostria, ny fandefasana azy ara-potoana mihoatra ny fanantenan'ny mpanjifan'izy ireo ary hahatratra ny fe-potoana fatratra. Vahaolana haingam-pandeha: Masom-bava grommets sy mpanasa lamba maloto manome setroka boribory mipetaka amin'ny masinina mitsidika ny Stimpson trano heva hiresahana amin'ny manam-pahaizana amin'ny fifadian-kanina ary hizaha ny fironana farany manamboatra lamba indostrialy farany na mitsidika ny tranokalanay ho an'ny filaminana an-tserasera mora sy azo antoka miaraka amin'ny baiko napetraka tamin'ny 3:00 hariva fandefasana io andro io ihany Fantaro ny Stimpson fahasamihafana. Grommets- mpanasa lamba - Eyelets - Snap Sets - Colombes amin'ny lavaka - fasteners - masinina mifatotra
Stream2Sea Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra fahasalamana sy hatsarana Stream2Sea dia ny masoandro-maso mineraly voalohany sy tokana amoron-dranomasina izay mandeha amin'ny resaka ary miantoka fa ny fitaratra sy ny fikolokoloana hoditra rehetra dia voasedra ary voaporofo fa azo antoka amin'ireo trondro sy olitra amin'ny haran-dranomasina. Ny fikolokoloana ny hoditra voajanahary sy hypoallergenic dia tsy misy akora simika toy ny benzophenones, oxybenzone, avobenzone, parabens, DEA / MEAs / TEAs, SLS na SLES ary preservatives. Masoandro ara-tontolo iainana namana - mpanadio tanana - vokatra fikolokoloana volo - fitafiana UPF
SurveyTelligence, Inc. Service Provider Serivisy ara-bola sy matihanina Fampandrenesana sy fanofanana momba ny fitantanana Ny iraka manerantany an'ny SurveyTelligence, Inc. dia ny fananganana fikambanana matanjaka, mailamailaka kokoa. Mampiasa diagnostika mpamorona mahery vaika, fitaovana ary fahaizana manokana izahay, mitsabo ny orinasa ho toy ny fikambanana, fa tsy singa iray amin'ny piozila fotsiny. Manokana izahay amin'ny fanovana ny fikambanana mampiasa ny "Alignment" ho toy ny rafitra. Mampahafantatra ireo PULSES amin'ny tombony sy vahaolana. Teknolojia vaovao manome fanaraha-maso tsy tapaka momba ny fahombiazan'ny orinasa tena izy, ny rafitry ny orinasa tena izy ary ny olona hampifaly ny mpanjifa. Ireo singa 4 an'ny ADN ao amin'ny orinasa dia tokony hampifanarahina ary hiasa miaraka amin'ny fampitomboana sy hampitomboana ny vola miditra. Tsotra ny teknolojia, havaozina isaky ny alina ny tabilao, miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena momba ny fanatanterahana ny orinasa manome fahafaha-manao fanapahan-kevitra mety. Tsy misy tsy ampoizina intsony! Fampivoarana ny fanadihadiana - Diagnostika amin'ny fanadihadiana - Fandinihana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa
Susa USA, LLC Manufacturer Fitaovana sy kojakoja indostrialy Fitaovana fonosana SUSA USA dia orinasam-pianakaviana manana sy miasa ary manana traikefa mandritra ny dimy taona. Manokana amin'ny famolavolana zavamaniry feno izahay mba hampidirana ny injeniera rehetra, ny fametrahana fitaovana, ny famolavolana CAD ary ny sary. Ireo manam-pahaizana manokana dia samy manana traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny famokarana fitaovana fanodinana sakafo sy fonosana, manokana amin'ny indostrian'ny ronono sy tsiranoka. Famolavolana zavamaniry sy injeniera - Rafitra fanodinana sakafo turnkey - Fitaovana fanodinana sakafo - Masinina famenoana - Fitaovana fanaovana fromazy - Fiara vy tsy miova - Pasteurizers
Tactical Superiority, Inc Manufacturer Fiarovana sy fiarovana Rifle Components Tactical Superiority, Inc dia OEM mpanamboatra ampahany sy singa ho an'ny Small Arms ao amin'ny indostrian'ny fiarovana. Nandritra ny 10 taona mahery, izahay dia nanolotra ny indostria sy ny mpanamboatra hafa ireo ampahany manakiana ilain'izy ireo hananganana ny vokatra. Barika basy vita amin'ny basy - singa mpanafika fanafihana - mpiorina basy tanana
Techfit Digital Surgery Service Provider Siansa fiainana sy haitao fitsaboana Teknolojia fandidiana fanavaozana TECHFIT Digital Surgery manolotra vahaolana feno mifanaraka amin'ny lalan'ny marary izay mitaky fanarenana sarotra, fampitomboana ny marina amin'ny fandidiana, fampihenana ny fotoana fandidiana, fanatsarana ny valin'ny hatsarana sy ny asany, izay mamela ny marary sy ny mpandidy hahazo ny drafitra fandidiana farany mandroso sy ny fampitaovana amin'ny fomba mahazatra. Fanodinam-pitsaboana 3D- Fandidiana fanavaozana - Vahaolana Maxillofacial - Vahaolana Cranial - Implants amin'ny fandidiana
The Golf Car Connection Manufacturer Fitaterana sy fitaovana Fiara mitondra fiara Golf Car Connection dia nanondrana sarety golf sy kojakojan'ny golf hatramin'ny 1981. Any South Florida, izahay no mpivarotra voalohany ny sarety golf sy ny faritra ho an'ny marika golf rehetra. Amin'ny maha mpivarotra an'i Yamaha nahazo alàlana azy, ny Golf Car Connection dia mitahiry sarety golf sy faritra misy sarety golf ho an'ny sarety golf Yamaha rehetra ary fiara fitaterana Yamaha. Golf Car Connection dia mitahiry faritra golf fitobiana maro ho an'ny mpanamboatra hafa toa ny Club Car, EZ-GO, sns. Afaka mahazo ampahany amin'ny fiara fitateram-bahoaka tsy mandeha intsony toa an'i Cushman, Taylor Dunn, ary Motrec izahay. Sarety golf - fitaterana hotely - fitaterana Resort - fitaterana Marina- fiara fitateram-bahoaka - fitaterana serivisy ho an'ny vahiny
The South Florida District Export Council Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Serivisy ara-bola sy matihanina Torohevitra momba ny varotra The South Florida District Export Council dia fikambanana iray misy mpitarika ara-orinasa avy amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, izay manana fahalalàna sy fahaiza-manao amin'ny asa aman-draharaha iraisam-pirenena dia manome loharanom-pahalalana arak'asa ho an'ireo orinasa any Monroe, Miami-Dade, Broward, Palm Beach Martin, St. Lucie & Indian River county. Mifandray akaiky amin'ny Ivotoerana fanampiana ny fanondranana entana an'ny departemanta amerikana amerikana sy ny serivisy amerikana ary serivisy ivelany, mihoatra ny 60 DEC no misy manerana ny firenena hanohanana ny ezaka fampiroboroboana ny governemanta amerikana. Serivisy varotra iraisam-pirenena -Fanoroana hevitra momba ny varotra - Fampandrosoana asa - fanarahan-dalàna amin'ny fanondranana - Fakan-kevitra amin'ny varotra iraisam-pirenena
The Teething Egg Manufacturer Entana ny mpanjifa Famatsy zaza The Teething EggNy vokatra azo tamin'ny loka sy ny famolavolana patanty dia ny halehibeny, ny endrika ary ny lanjany ho an'ny tanana sy vava kely. Ny teether sy ny fitaovanay dia namboarina teto Etazonia niaraka tamin'ny fitaovana fampiasa amin'ny sakafo FDA sy ny fiarovana voasedra manerantany ho an'ny zazakely. Ny vokatray rehetra dia tohanan'ny fiantohana vola 90 andro. Manafatra anio, tsy misy atahorana, ary ataovy mitsiky ny zazakely! Peratra Teething - Fitaovana nify
Thomalex Service Provider Teknolojian'ny fampahalalana fifandraisan-davitra Thomalex dia orinasa teknolojia any Miami izay manome fitaovana sy serivisy famandrihana an-tserasera sy orinasa ho an'ireo masoivohon'ny Travel sy Internet, orinasa fitantanana fitetezam-paritany ary orinasa lehibe. Mpanamboatra lozisialy rindrambaiko - Fampiharana finday maranitra - Fitaovana famandrihana sidina an-tserasera
Thompson Pump Manufacturer Fitaovana sy kojakoja indostrialy paompy Thompson Pump hajaina eran'izao tontolo izao noho ny andalana be mavesatra amin'ny paompy avo lenta, manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 18 santimetatra. Thompson Pump mivarotra ny paompin'izy ireo manontolo amin'ny faritry ny tanàna, fananganana, trano fanofana ary fitrandrahana. Fitaovana fanamboarana - Fitaovana fitrandrahana harena ankibon'ny tany - Paompy indostrialy- Paompy rano- Paompy slurry
Total Translations Group Service Provider Serivisy ara-bola sy matihanina Translation Total Translations Inc. dia orinasa mpandika teny sy mpandika teny ao amin'ny fanjakan'ny Florida. Niorina tamin'ny taona 1999, Total Translations dia orinasa nahazo fankatoavana A + nataon'ny Better Business Bureau ary mpikambana ao amin'ny American Translators Association. Nandritra ny traikefa an-taonany maro nanampiana ireo mpanondrana sy orinasa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, ny Total Translations dia mahatakatra ny herin'ny fiteny sy ny haitao hanamorana ny asa aman-draharaha ho an'ny mpanondrana sy ny orinasa amerikana. Manambatra ny haitao mandroso sy ny fahalalan'olombelona izahay mba hanatontoloana ny serivisy ho an'ny orinasa fanondranana. Avelao izahay hanampy anao amin'ny fandikan-teny avo lenta, fandikan-teny, marketing nomerika ary serivisy haino aman-jery ho an'ny zavatra ilainao. Serivisy ho an'ny mpanondrana sy orinasa: fandikana antontan-taratasy ara-dalàna sy ara-bola amin'ny fiteny maro. Fandikana miaraka amin'ny fanohanana ara-teknika ny orinasa. Fanatrehana amin'ny Internet amin'ny fiteny maro, marketing nomerika. Fonosana sy dokam-barotra amin'ny fiteny maro. Lahatsary sy sary mifandray. Fandikana antontan-taratasy - Fandikana boky torolàlana ara-teknika - Fandikana endrika fandraharahana - Serivisy fandikana video
Triple Strand Global Solutions, LLC Service Provider Fakan-kevitra, toro-hevitra ary fampandrosoana Fiaramanidina, Aerospace, fiarovana, fampiharana lalàna ary fiofanana Orinasa mpanolotsaina, mpanolotsaina ary fampandrosoana. Fiaramanidina - faharanitan-tsaina - fitsaboana - fiarovana sy fiarovana vahaolana amin'ny consulting
U.S. Commercial Service governemanta Serivisy ara-bola sy matihanina Fampandrenesana sy fanofanana momba ny fitantanana Global Markets dia manampy sy mpiaro ny orinasan'i Etazonia amin'ny tsena iraisam-pirenena hampiroborobo ny fanambinana ara-toekarena amerikana. Mampiasa ny tambajotranay momba ny fampiroboroboana ny varotra sy ireo matihanina amin'ny politika izay mihoatra ny 100 U.S. Commercial Service birao manerana ny firenena sy amin'ny birao iraisam-pirenena mihoatra ny 70, Global Markets dia mampiroborobo ny fanondranana any Etazonia, indrindra amin'ireo orinasa kely sy salantsalany; mandroso sy miaro ny tombontsoan'ny varotra amerikana any ampitan-dranomasina; ary manintona ny fampiasam-bola anatiny mankany Etazonia. Fampiroboroboana ny fanondranana - Advocacy Export - Counselling Export - Fitsipika momba ny fanondranana any Etazonia
UltraVision Corporation Manufacturer Siansa fiainana sy haitao fitsaboana Medical Equipment UltraVision Corporation dia mpamorona rafitra fitarafana fitsaboana ultrasound. Ny vokarenanay dia ny UltraVision-XS izay Point of Care Ultrasound System izay midika fa natao hoentina eo am-pandriana na ho any an-tsaha. Ny UltraVision-XS dia nankatoavin'ny FDA, manao ny fomba fitarafana rehetra ao anatin'izany ny elastography, shear, ary photoacoustics. Ny orinasa dia manao fikarohana manokana ary manolotra vokatra toy ny UltraVision-XR izay sehatra fikarohana mamela ny fikarohana ultrasound ataon'ny hafa sy ny anjerimanontolo. Ny fikarohana natao hatramin'izao dia niteraka fomba vaovao mampiseho ny mikrokaly fanamarihana momba ny fitiliana homamiadan'ny nono. Ny kinova amin'ny sehatry ny fikarohana dia afaka mamokatra frame hatramin'ny 10,000 isan-tsegondra. Ny UltraVision-LM dia scanner hand-Wi-Fi-mifandray amin'ny alàlan'ny bateria ho an'ny fampiharana manokana. Ireo scanner dia misy ho toy ny singa tsy voaangona ahafahan'ny orinasa mampiditra votoatiny eo an-toerana mba hampihena ny vidiny sy ny adidiny. Diagnostika momba ny fitsaboana amin'ny ultrasound - Famantarana ny homamiadana - feo ultras - neurodiagnostics
University of Florida anjerimanontolo Institution Educational ELI sy ny sekoly ambaratonga faharoa UF English Language Institute ary ny sekoly ambaratonga faharoa dia hanome fampahalalana momba ny anglisy be fatratra, akademika, ary ny mari-pahaizana Master sy Doctoral izay hita ao amin'ny oniversitem-bahoaka # 1 any Florida. Manasa anao izahay hiresaka amin'ny solontena iray momba ny fandinihana anglisy natao ho an'ny vondron'ny mpiasa na mpampianatra anao. Ny ELI dia manana taranja mivantana, ary fandaharam-pianarana amin'ny teny anglisy mandritra ny fotoana fohy ho an'ny mpiasanao amin'ny sehatra rehetra. Ny ELI sy ny Sekoly Nahazo diplaoma dia afaka manome torolàlana momba ny fidirana, ny fidirana ELI amin'ny fepetra ary ny fotoana ahazoana tombony amin'ny akademika ary koa ny firotsahan'ny fiarahamonina any Gainesville, Florida. Tongasoa eto amin'ny Sunshine State. Miaina ny kolontsaina, mianatra ny fiteny, tiavo ny Gators! Fianarana amin'ny anglisy sy bakalorea
University of North Florida anjerimanontolo Institution Educational Programme ESL The University of North Florida miorina ao Jacksonville, Florida miaraka amin'ny fisoratana anarana 17,016, ny UNF dia halehibeny mety hanolorana ireo mpianatra hanana fotoana tsy manam-paharoa sy traikefa nahafinaritra tao amin'ny campus. UNF dia manana fandaharam-pianarana 55 bakalorea (bakalorea) mihoatra ny 100 azo atao mifantoka. Ho fanampin'izay, UNF dia manana fandaharam-pianarana nahazo diplaoma 30+ (mari-pahaizana na mari-pahaizana doctorat). Mpianatra avy amin'ny firenena maherin'ny 70 no miantso ny UNF ho ao an-tranony, mamorona oniversite manana fomba fijery manerantany. Manana ny vatsim-pianarana isan-karazany toy ny vatsim-pianarana amerikana latina sy karibeana ary koa ny vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena izay manampy ny mpianatra amin'ny fangatahana ara-bola amin'ny oniversite. Ho fanampin'ny fandaharam-pianarana, UNF dia manolotra programa amin'ny teny anglisy. Ny programa ELP dia manana ambaratonga enina amin'ny torolàlana. Fampianarana 22 ora mahery isan-kerinandro miaraka amin'ny haben'ny kilasy 12-16 mpianatra. Ny traikefa ara-kolotsaina dia misy ny fitsangatsanganana an-tsaha, ny fahafahan'ny mpilatsaka an-tsitrapo ary ny mpianatra UNF ho mpiara-miasa aminy. Fandaharana amin'ny fiteny Anglisy - Courses amin'ny fiomanana amin'ny oniversite
University of South Florida anjerimanontolo Institution Educational Fianarana ankapobeny The University of South Florida dia oniversite fikarohana manerantany misy fiatraikany be loatra natokana ho an'ny fahombiazan'ny mpianatra. Nandritra izay 10 taona lasa izay, tsy nisy oniversite ho an'ny daholobe hafa teto amin'ny firenena izay nisondrotra haingana kokoa tamin'ny laharan'ny oniversite nasionalin'ny US News sy World Report noho ny USF. Ny University amin'izao fotoana izao dia mitana ny laharana faha # 46 amin'ireo oniversitem-panjakana ao amin'ny US News and World Report National University Rankings (2021) ary The Princeton Review dia mitanisa ny USF ho College mendrika indrindra hanomezana mpianatra ho an'ny fampianarana ambony sy ny fahavononany asa amin'ny vidiny mirary. USF dia misoratra anarana amin'ny mpianatra 50,000 3,450 mahery, ao anatin'izany ny mpianatra iraisam-pirenena miisa 140 avy amin'ny firenena 12 mahery, manerana ireo campus telo ao Tampa, St. Petersburg, ary Sarasota-Manatee. USF dia notendren'ny Birao Governora ho an'ny Preeminance Research University, nametraka azy ho sokajy ambony indrindra amin'ireo oniversitem-panjakana XNUMX an'ny fanjakana. Mpiara-miasa amin'ny diplaoma Doctorat - Fandaharam-pianarana any ivelany - Fianarana amin'ny Internet
Unnique - The Premium Brand of Hair Treatments Manufacturer Entana ny mpanjifa Vokatra fahasalamana sy hatsarana Unnique - The Premium Brand of Hair Treatments... orinasa iray manam-pahaizana manokana ary mifantoka amin'ny fanomezana tolo-kevitra hafa amin'ny Beauty Market, miasa tsy tapaka amin'ny fanavaozana, ny fikarohana ary ny fampandrosoana ny vokatra izay mifanaraka amin'ny filan'ny volo isan-karazany sy ny olona matihanina amin'ny hatsaran-tarehy. Ny tena tanjony dia ny manatsara ny volo, noho io antony io dia nivoatra nandritra ny fotoana mandeha izy, fampifangaroana botanika, izay mampifangaro ireo akora mavitrika avy amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao mba hampanan-karena ny tsirairay ny raikipohy ao amin'ny portfolio-vokatra atolotray. Vokatra fikolokoloana volo - fitsaboana Keratin - menaka argona - kojakoja fanatsarana tarehy - Vokatra salon-volo -sy Fitaovana fanaovan-tarehy
Venergy Manufacturer Clean1tp Jiro sy jiro amin'ny masoandro Jiro (LED sy UV-C), Solar, PPE Gear Jiro (LED sy UV-C) - Gear PPE - Fitantanana ny fananganana - Fiomanana amin'ny vonjy maika - Fakan-kevitra momba ny angovo - Teknolojia angovo avy amin'ny masoandro
Vero Water Manufacturer Fitaovana sy kojakoja indostrialy Fitaovana sy teknolojia fanadiovana rano Vero Water dia mpamatsy lozisialy ara-tontolo iainana ary rano mamirapiratra ho an'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny, natolotra ho an'ny mpanjifa 75 tapitrisa isan-taona, any Etazonia sy firenena 12 manerantany. Vero dia manolotra rano matsiro sy mamirapiratra miavaka tsara izay safidy hafa amin'ny rano tavoahangy, maharitra kokoa amin'ny tontolo iainana, ary marika mahasoa kokoa ho an'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny mifanohitra amin'ny rano tavoahangy nentim-paharazana. Ny fizotran'ny fanadiovan-tenan'i Vero dia ahafahan'ny mpanjifa manadio, mampangatsiatsiaka, mameno ary manompo an'i Vero milamina sy rano mangotraka amin'ny paompy sy fangatahana. Vero water dia manompo am-pireharehana an'ireo chef, restaurateurs, hotely, fitsangantsanganana an-tsambo ary birao manerantany mahomby indrindra. Ny tsiro soniavin'i Vero dia madio sy mangatsiaka - marihin'ny vavam-bava marevaka sy famaranana maivana ary mamelombelona. Ny kalitao miavaka, ampiarahana amin'ny ambaratonga serivisy tsy manam-paharoa omena ny mpanjifany, dia nandrisika Vero Water any amin'ny trano fisakafoanana be mpitia eran-tany. Fitaovana fisakafoanana - Fitaovana Hotely - Fitaovana ao an-dakozia - Rano madio mangatsiaka sy mangatsiaka - rano tavoahangy
WitZense Mpanome / Mpizara Teknolojian'ny fampahalalana (Telecom) Fanaraha-maso RFID Inventory and Technology GPS Tracking Technology Vahaolana Advanced IoT fanaraha-maso sy fitantanana risika, ampiasain'ny finday 4G LTE, sehatra mifototra amin'ny rahona ary fianarana milina hanomezana toerana, horonan-tsary ary haavon'ny lisitra ankehitriny. Fanaraha-maso GPS Asset - Video Telematics - Tracking RFID Inventory - Sensors IoT Industrial
Women's Business Centers In Florida Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Fikambanan'ny fampandrosoana toekarena Business Development Torohevitra, fanofanana, fampianarana ary atrikasa ho an'ny vehivavy te-hanomboka, hitombo, hihazakazaka ary hanitatra orinasa mahomby. Torohevitra momba ny raharaham-barotra - Fanofanana momba ny asa - Fanoloran-tena momba ny asa - Fandraharahana
World Housing Solution Manufacturer Fiarovana sy fiarovana Ireo firafitra efa vita vita amin'ny lamba World Housing Solution, Inc dia famoronana fanamboarana endrika izay efa namolavola fifehezana amin'ny famoronana vahaolana amin'ny fialofana sy ny rafitra manaraka. Ireo teknolojia ireo dia namboarina sy novokarina tany Etazonia dia maivana, maodely ary mahomby be. Ny kinova azo esorina amin'ny fialofana voaroaka be voatroka dia manome fivezivezena miaraka amin'ny herinaratra, rano ary fifandraisana, vonona ny handeha na aiza na aiza ao anaty fonosana manara-dalàna toy ny Clinics on Wheels ™ and Mobile Response Units ™. Izany dia ahafahan'ny mpiady mpiady, ny mpamaly ny voina, ny tobin'ny mpiasa ary ny mpitsabo miasa hiasa amin'ny tontolo iainana mahantra. Ny tantaram-piainantsika 10 taona dia misy mpanjifa izay misy ny Departemantan'ny Fiarovana amerikana, US ARMY, US NAVY, US AIR FORCE, US Special Operations Command, US MARINE CORPS, Departamento DE SALUD, United Nations, FEMA, The Salvation Army ary County maro sy tanàna manerana an'i Etazonia. Rindrina henjana mikatona haingana - Toeram-pitsaboana amin'ny kodiarana - Fitaovana valin-kafatra finday - trano fonenana valin-trano - Trano miaramila - fialofana vonjy maika
World Panel Products Inc. Manufacturer Vokatra sy haitao an-dranomasina Fitaovana fanamboarana sambo World Panel Products dia nanomboka tamin'ny taona 1993 mba hanovana ny fomba fanamboaran'ny mpanao sambo, mpanamboatra ary olona manana sambo an-tapitrisany manana kalitao sy akora mitambatra. Androany dia izahay no mpizara mpiorina an-dranomasina any Etazonia izay manana fotodrafitrasa 2 matanjaka sy mitombo. Ny ekipan'ny varotra manam-pahalalana dia vonona hamaly ny fanontanianao rehetra momba ny vokatray sy ny fampiasana azy ireo. Maniry mafy izahay hanampy ny mpanjifanay hitady vahaolana amin'ny olan'izy ireo mba hamerenany ny sambon'izy ireo amin'ny rano ara-potoana. Matetika ny mpanjifanay dia miresaka aminay ny sakaizany mifototra amin'ny zavatra tsara niainany izay niara-niasa taminay sy ny kalitaonay. Izahay dia mpamaha olana: Avy amina entana tsy ho eny amin'ny talantalana mba hamerenanao ny rano na ny tetikasa famokarana maharitra, dia manana fitaovana hanafainganana ny baikonao na ny fandaharam-potoana izahay hamokarana mba hahazoana antoka fa vita soa aman-tsara ny fandefasana. Manana specie ao an-tsaina? Mitady hazo mifanaraka aminy? Manam-pahaizana momba ny hazo izahay. Kitapo an-dranomasina - tontonana vita amin'ny hazo sentetika - Fitaovana fanamboarana sambo